ပထမဆင့် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ – အဘိဓမ္မာ (ရိုးရိုး) မေးခွန်းဟောင်းများ
ပထမဆင့် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
Posted November 23, 2017 December 1, 2017 asadmin
၁၉၈၉-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ အကြောင်းတရားဖြစ်သော ဟိတ်ခြောက်ပါး သရုပ်ကို ဖော်ပြ၍၊ ယင်း ဟိတ်ခြောက်ပါးကို ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်၊ အဗျာကတဟိတ်အားဖြင့် ဝေဖန်ပြပါ။
အကြောင်းတရားဖြစ်သော ဟိတ်ခြောက်ပါး သရုပ်ကို ဖော်ပြရသော် –
(၆) အမောဟဟိတ် တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
ဟိတ်ခြောက်ပါးကို ကုသိုလ်၊အကုသိုလ်၊ အဗျာကတဟိတ်အားဖြင့် ဝေဖန်ပြရသော် –
ကုသိုလ်ဟိတ် = (၁) အလောဘဟိတ်၊ (၂) အဒေါသဟိတ်၊ (၃) အမောဟဟိတ် – ပေါင်း ၃-ပါး၊
အကုသိုလ်ဟိတ် = (၁) လောဘဟိတ်၊ (၂) ဒေါသဟိတ်၊ (၃) မောဟဟိတ် – ပေါင်း ၃-ပါး၊
အဗျာကတဟိတ် = (၁) အလောဘဟိတ် (၂) အဒေါသဟိတ် (၃) အမောဟဟိတ် – ပေါင်း ၃-ပါး
ဟူ၍ အသီးသီး ဖြစ်ကြပါသည်။
၂။ လူတို့၌ ချမ်းသာမှု (သုခ)၊ ဆင်းရဲမှု (ဒုက္ခ)ဝေဒနာတို့ကို ခံစားရသည့်အခါ ယင်းဝေဒနာ တို့နှင့်တကွ ဖြစ်သောစိတ်တိုိ့ကို ခွဲခြားရေးပြပါ။
လူတို့၌ ချမ်းသာမှု (သုခ)၊ ဆင်းရဲမှု (ဒုက္ခ) ဝေဒနာတို့ကို ခံစားရသည့်အခါ ယင်းဝေဒနာ တို့နှင့်တကွ ဖြစ်သောစိတ်တို့မှာ –
(က) ဣန္ဒြိယဘေဒနည်းအရ –
ချမ်းသာမှု(သုခ)	=	သုခသဟဂုတ် ကာယဝိညာဏ် ၁-ပါး
ဆင်းရဲမှု (ဒုက္ခ) = ဒုက္ခသဟဂုတ် ကာယဝိညာဏ် ၁-ပါး
(ခ) အနုဘဝနနည်းအရ –
ချမ်းသာမှု(သုခ) = သောမနဿဟဂုတ်စိတ် ၆၂-ပါး
သုခသဟဂုတ် ကာယဝိညာဏ် ၁-ပါး
ဆင်းရဲမှု (ဒုက္ခ)	= ဒေါမနဿသဟဂုတ်စိတ် ၂-ပါး
ဒုက္ခသဟဂုတ် ကာယဝိညာဏ် ၁-ပါး
၃။ သင်၏ခန္ဓာကိုယ်၌ရှိသော ဒွါရခြောက်ခုတို့တွင် “မနောဒွါရ” ဟူသည် အဘယ်အရာကို ခေါ်ဆိုသနည်း၊ ဖော်ပြ၍ ယင်း မနောဒွါရ၌ဖြစ်သော စိတ်တို့ကိုလည်း အကျဉ်းသင်္ချာသရုပ်မျှ ရေးပြပါ။
ကျွန်ုပ်၏ခန္ဓာကိုယ်၌ရှိသော ဒွါရခြောက်ခုတို့တွင် “မနောဒွါရ” ဟူသည်မှာ –
ဝီထိစိတ်တို့၏ ဖြစ်ကြောင်း ဘဝင်စိတ် (တစ်နည်း) ဘဝင်္ဂုပစ္ဆေဒစိတ် ၁၉-ပါးကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မနောဒွါရ၌ဖြစ်သော စိတ်တို့ကိုလည်း အကျဉ်းသင်္ချာသရုပ်မျှ ရေးပြရသော် –
မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းစ်ိတ် = ၁-ပါး
ဇောစိတ် = ၅၅-ပါး
တဒါရုံ = ၁၁-ပါး
ပေါင်း စိတ် = ၆၇-ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။
၄။ ကာမဘုံသား လူသားတိုင်း၌ရသော ဝတ္ထုရုပ်များကို ရေတွက်ပြ၍၊ အရူပဗြဟ္မာများ၌ မည်သည့် ဝတ္ထုရုပ်များ ရှိသည်၊ မရှိသည်ကို ရှင်းလင်းရေးသားခဲ့ပါ။
ကာမဘုံသား လူသားတိုင်း၌ ရရှိသော ဝတ္ထုရုပ်များမှာ –
(၆) ဟဒယဝတ္ထု၊ ဟူသော ဝတ္ထုရုပ် ၆-ပါးလုံး ဖြစ်ပါသည်။
အရူပဗြဟ္မာများ၌ ရုပ်တရားမှန်သမျှကို စက်ဆုပ်သော ဘာဝနာ၏ အစွမ်းကြောင့် ရုပ်တရားဟူသမျှ လုံးဝမရှိ၊ စိတ်-စေတသိက် အစဉ်သာရှိသော အရူပဘုံ၌ ဖြစ်ကြရသည့်အတွက် မှီရာဝတ္ထုရုပ် ၆-ပါးလုံး မရှိပါ။
၁၉၉၀-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ ဝေဒနာ ၃-ပါး၊ ဝေဒနာ ၅-ပါး ဟုပြောဆိုကြရာ၌ ၃-ပါး၊ ၅-ပါး တို့၏ သရုပ်ကို ထုတ်ပြ၍၊ သုခဝေဒနာနှင့်တကွ ဖြစ်သော စိတ်ကိုလည်း ညွှန်ကြားပြပါ။
ဝေဒနာ ၃-ပါး၏ သရုပ်မှာ (အာရမ္မဏာနုဘဝနနည်းအရ) –
(၃) အဒုက္ခ – မသုခဝေဒနာ ဟူ၍ ဝေဒနာ ၃-ပါးဖြစ်၏။
ဝေဒနာ ၅-ပါး၏သရုပ်မှာ (ဣန္ဒြိယဘေဒနည်းအရ) –
(၅) ဥပေက္ခာဝေဒနာ ဟူ၍ ဝေဒနာ ၅-ပါး ဖြစ်၏။
သုခဝေဒနာနှင့်တကွဖြစ်သော စိတ်တို့ကို ညွှန်ပြရသော် –
(က) အာရမ္မဏာနုဘဝနနည်းအရ …
သုခဝေဒနာနှင့်တကွဖြစ်သော စိတ်များမှာ –
အဟိတ်ကုသလဝိပါက် သုခသဟဂုတ် ကာယဝိညာဏ်စိတ် = ၁-ပါး
သောနဿသဟဂုတ်စိတ် = ၆၂-ပါး
ပေါင်း စိတ် = ၆၃-ပါး
(ခ) ဣန္ဒြိယဘေဒနည်းအရ …
အဟိတ်ကုသလဝိပါက် သုခသဟဂုတ် ကာယဝိညာဏ်စိတ် ၁-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ကိစ္စ ၁၄-ပါးကို မမှားအောင် ရေတွက်ပြပါ။
ကိစ္စ ၁၄-ပါးကို မမှားအောင် ရေတွက်ပြရသော် –
(၁၃) တဒါရုံကိစ္စ နှင့်
(၁၄) စုတိကိစ္စ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
၃။ စိတ် ၈၉-ပါးအနက် အခါခပ်သိမ်း ဒွါရခြောက်ပါးမှ လွတ်သောစိတ်များကို ညွှန်ကြားပြပါ။
စိတ် ၈၉-ပါးအနက် အခါခပ်သိမ်း ဒွါရခြောက်ပါးမှ လွတ်သောစိတ်များမှာ – “မဟဂ္ဂုတ်ဝိပါက်စိတ် ၉-ပါး” တို့ဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းမှာ – ဤစိတ် ၉-ပါးတို့သည် ပဋိသန္ဓေကိစ္စ၊ ဘဝင်ကိစ္စ၊ စုတိကိစ္စ တို့ကိုသာ ဆောင်ရွက်ကြသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
၄။ စိတ် ၈၉-ပါးအနက် လောကုတ္တရာအာရုံမှတစ်ပါး ကျန်အာရုံများကို အာရုံပြုနိုင်သော စိတ်များကို သိသာရုံမျှ ဖော်ပြပါ။
စိတ် ၈၉-ပါးအနက် လောကုတ္တရာအာရုံမှတစ်ပါး ကျန်အာရုံများကို အာရုံပြုနိုင်သော စိတ်များမှာ –
မဟာကုသိုလ် ဉာဏဝိပ္ပယုတ်စိတ် = ၄-ပါး
မဟာကြိယာ ဉာဏဝိပ္ပယုတ်စိတ် = ၄-ပါး
ပေါင်း စိတ် = ၂၀-ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။
(၎င်းစိတ် ၂၀-ပါးတို့သည် လောကီစိတ် – ၈၁ ၊ စေတသိက် – ၅၂၊ ရုပ် – ၂၈၊ ပညတ် တည်းဟူသော လောကီအာရုံ ၆-ပါးကို အာရုံပြုကြ၏)
၁၉၉၁-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ ပကိဏ်းပိုင်းလာ ဟိတ်ခြောက်ပါးသရုပ်ကို ထုတ်ပြ၍၊ စိတ် ၈၉-ပါးကို ဧကဟိတ်၊ ဒွိဟိတ်၊ တိဟိတ်စိတ်တို့ဖြင့်
ပကိဏ်းပိုင်းလာ ဟိတ် ၆-ပါးသရုပ်မှာ –
လောဘဟိတ်၊ ဒေါသဟိတ်၊ မောဟဟိတ် နှင့် အလောဘဟိတ်၊ အဒေါသဟိတ် ၊ အမောဟဟိတ် တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
ဧကဟိတ်စိတ် = ၂-ပါး
ဒွိဟိတ်စိတ် = ၂၂-ပါး
တိဟိတ်စိတ် = ၄၇-ပါး အသီးသီး ဖြစ်ကြပါသည်။
၂။ ဌာန ၁၀-ပါး ကို မှန်ကန်အောင် ဖြေဆို၍၊ သုံးကိစ္စ၊ သုံးဌာနတပ်သော စိတ်များကိုလည်း အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြခဲ့ပါ။
ဌာန ၁၀-ပါးမှာ –
(၉) တဒါရုံဌာန နှင့်
(၁၀) စုတိဌာန တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
သုံးကိစ္စ ၊ သုံးဌာန တပ်သောစိတ်တို့မှာ – မဟဂ္ဂုတ်ဝိပါက်စိတ် ၉-ပါး တို့ဖြစ်ပြီး၊ ယင်းစိတ်တို့သည် …
(၁) ပဋိသန္ဓေကိစ္စကို – ပဋိသန္ဓေဌာန၌လည်းကောင်း၊
(၂) ဘဝင်ကိစ္စကို – ဘဝင်ဌာန၌လည်းကောင်း၊
(၃) စုတိကိစ္စကို – စုတိဌာန၌လည်းကောင်း ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။
၃။ လောကတွင် “မနောဓာတ်ဖြင့် အတတ်ဟောသည်” ဆိုရာ၌ အဘယ်အရာကို မနောဓာတ်ခေါ်ဆိုပါသနည်း၊ ဖြေဆို၍ ယင်းမနောဓာတ်၏ တည်ရာ၊ မှီရာ၊ ဒွါရ၊ အာရုံ ဝတ္ထုတိုိ့ကိုလည်း ညွှန်ပြရေးသားခဲ့ပါ။
ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ် ၁-ပါး နှင့် သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းစိတ် ၂-ပါး တို့ကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းမနောဓာတ် ၃-ပါးတို့၏ –
(က) ဖြစ်ရာဒွါရ = (စက္ခုဒွါရ ၊ သောတဒွါရ၊ ဃာနဒွါရ၊ ဇိဝှါဒွါရ နှင့် ကာယဒွါရ ဟူသော) ပဉ္စဒွါရ၊
(ခ) အာရုံ = (ရူပါရုံ ၊ သဒ္ဒါရုံ ၊ ဂန္ဓာရုံ ၊ ရသာရုံ နှင့် ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ ဟူသော ) ပစ္စုပ္ပန် ပဉ္စာရုံ၊
(ဂ) မှီရာဝတ္ထု = ဟဒယဝတ္ထု(မြဲ) တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
၁၉၉၂-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ စိတ်၊ စေတသိက် တို့သည် စာဖြေသူတို့၏ ခန္ဓာအိမ်သို့ မည်သည့် တံခါးပေါက်များမှ ဝင်ရောက်လာကြပါသနည်း၊ ဝင်ရောက်လာသည့် တံခါးပေါက်၏ အမည်များကို ဖော်ပြ၍၊ ယင်းတံခါးပေါက်များမှ ဝင်ရောက် မလာနိုင်သည့် စိတ်တို့ကို
စိတ်၊စေတသိက် တို့သည် စာဖြေသူတုိ့၏ ခန္ဓာအိမ်သို့ –
ဒွါရ ၆-ပါးတည်းဟူသော တံခါးပေါက်များမှ ဝင်ရောက်လာကြပါသည်။
ယင်းတံခါးပေါက် (ဒွါရ ၆-ပါး)တို့မှာ –
စက္ခုဒွါရ၊ သောတဒွါရ၊ ဃာနဒွါရ၊ ဇိဝှါဒွါရ၊ ကာယဒွါရ နှင့် မနောဒွါရ တို့ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းတံခါးပေါက်များမှ ဝင်ရောက်မလာနိုင်သည့် စိတ်များမှာ –
ပဋိသန္ဓေ၊ ဘဝင်၊ စုတိကိစ္စတပ်သော စိတ် ၁၉-ပါး (ဒွါရဝိမုတ်စိတ် ၁၉-ပါး) ဖြစ်သည့် –
ဥပေက္ခာသန္တီရဏစိတ် = ၂-ပါး
မဟဂ္ဂုတ်ဝိပါက်စိတ် = ၉-ပါး – (မြဲလွတ်)
ပေါင်း စိတ် = ၁၉-ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။
၂။ “ဈာန်အဘိညာဉ်” ဟူသော စကားဝယ် “အဘိညာဉ်”၏ ပရမတ္ထတရားကိုယ်ကို ဖော်ပြ၍ ယင်းအဘိညာဉ်ဖြင့်
ထူးထူးခြားခြား အာရုံပြု သိရှိနိုင်သည့် အရာများကိုလည်း ဖြေဆိုပါ။
“ဈာန်အဘိညာဉ်” ဟူသော စကားဝယ် “အဘိညာဉ်” ၏ ပရမတ္ထတရားကိုယ်ကို ဖော်ပြရသော် –
(၁) အထူးသိစွမ်းနိုင်သော (ဝါ) အဘိညာဉ်ကိစ္စတပ်သော၊ ရူပပဉ္စမဈာန် ကုသိုလ်စိတ်နှင့် ယှဉ်သော “ပညာစေတသိက် နှင့်၊
(၂) အထူးသိစွမ်းနိုင်သော (ဝါ) အဘိညာဉ်ကိစ္စတပ်သော၊ ရူပပဉ္စမဈာန် ကြိယာစိတ်နှင့် ယှဉ်သော “ပညာစေတသိက်”
တို့ကို မုချအားဖြင့် ရပါသည်။
အထူးသိစွမ်းနိုင်သော ရူပပဉ္စမဈာန် ကုသိုလ်ဇောစိတ်နှင့် ကြိယာဇောစိတ်တို့ကို (တကွ ဖြစ်ဖက်နည်းအရ)
(၁) ကုသိုလ်အဘိညာဉ်ဖြင့် –
အရဟတ္တမဂ်၊ အရဟတ္တဖိုလ်ကြဉ်သော အလုံးစုံသော အာရုံ (စိတ်-၈၇၊ စေတသိက်-၅၂၊ ရုပ်-၂၈၊ နိဗ္ဗာန်၊ ပညတ်)
တို့ကို ထူးထူးခြားခြား အာရုံပြု သိရှိနိုင်ပြီး၊
(၂) ကြိယာ အဘိညာဉ်ဖြင့် –
စိတ်-၈၉၊ စေတသိက်-၅၂၊ ရုပ်-၂၈၊ နိဗ္ဗာန်၊ ပညတ် (ကာမ၊ မဟဂ္ဂုတ်၊ လောကုတ္တရာ၊ ပညတ်)ဟူသော အာရုံ အလုံးစုံကို ထူးထူးခြားခြား အာရုံပြု သိရှိနိုင်ပါသည်။
၃။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်သူတိုင်း “နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြု၍ လှူဒါန်းသည်” ဆိုရာ၌ နိဗ္ဗာန်ကို ဧကန်အာရုံပြုနိုင်သော စိတ်သရုပ်ကို ထုတ်ပြ၍၊ လောကီအာရုံများနှင့် ပျော်မွေ့လျက်ရှိသော စိတ်တို့ကိုလည်း ရေတွက်ပြပါ။
နိဗ္ဗာန်ကိုဧကန်အာရုံပြုနိုင်သော စိတ်သရုပ်မှာ –
မဂ်စိတ် ၄-ပါးနှင့် ဖိုလ်စိတ် ၄-ပါးဟူသော လောကုတ္တရာစိတ် ၈-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
လောကီအာရုံများနှင့် ပျော်မွေ့လျက်ရှိသော စိတ်တို့မှာ –
၄။ စိတ်၊ စေတသိက်တို့၏ တည်ရာ၊ မှီရာ ဝတ္ထု ၆-ပါးကို ရေတွက်ပြ၍၊ ယင်းဝတ္ထုရုပ်များကို လုံးဝမမှီဘဲဖြစ်သော
စိတ်၊ စေတသိက် တို့၏ တည်ရာ၊ မှီရာ ဝတ္ထု ၆-ပါး မှာ –
(၆) ဟဒယဝတ္ထု တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဝတ္ထုရုပ်ကို လုံးဝမမှီဘဲ ဖြစ်သောစိတ်မှာ – အရူပဝိပါက်စိတ် ၄-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၉၃-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ “ကိစ္စများမြောင်၊ ဤလူ့ဘောင်ဝယ်” ဟူသည်နှင့်အညီ လူသားတစ်ယောက်အတွက် မွေးသည်မှ သေသည်အထိ မလွဲမဖယ် ပြုဖွယ်ကိစ္စများကို ထုတ်ဆောင်ပြ၍၊ ယင်းကိစ္စတို့၏ ဖြစ်ရာဌာနများကိုလည်း ညွှန်ပြခဲ့ပါ။
လူသားတစ်ယောက်အတွက် မွေးသည်မှ သေသည်အထိ မလွဲမဖယ် ပြုဖွယ်ကိစ္စများနှင့် ယင်းကိစ္စတို့၏ ဖြစ်ရာဌာနများမှာ –
(၁) ပဋိသန္ဓေကိစ္စ (၁) ပဋိသန္ဓေဌာန၊
(၂) ဘဝင်ကိစ္စ (၂) ဘဝင်ဌာန၊
(၃) အာဝဇ္ဇန်းကိစ္စ (၃) အာဝဇ္ဇန်းဌာန၊
(၉) သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းကိစ္စ (၅) သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းဌာန၊
(၁၀) သန္တီရဏကိစ္စ (၆) သန္တီရဏဌာန၊
(၁၁) ဝုဋ္ဌောကိစ္စ (၇) ဝိဋ္ဌောဌာန၊
(၁၂) ဇောကိစ္စ (၈) ဇောဌာန၊
(၁၃) တဒါရုံကိစ္စ (၉) တဒါရုံဌာန၊
(၁၄) စုတိကိစ္စ (၁၀) စုတိဌာန၊
၂။ ဒွါရခြောက်ပါးတို့တွင် အဘယ်စိတ်ကို မနောဒွါရ ခေါ်ဆိုပါသနည်း၊ ဖော်ပြ၍ ဒွါရအားလုံး၌ ဖြစ်သောစိတ်နှင့် ဒွါရအားလုံး မှ လွတ်သောစိတ်တို့ကိုလည်း ကွဲပြားအောင် ဖြေဆိုခဲ့ပါ။
ဒွါရခြောက်ပါးတို့တွင် မနောဒွါရဟု ခေါ်ဆိုရသော စိတ်မှာ –
ဝီထိစိတ်တို့၏ဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သော ဘဝင်စိတ် ၁၉-ပါး (တစ်နည်း) ဘဝင်္ဂုပစ္ဆေဒစိတ် ၁၉-ပါးတို့ ဖြစ်ကြပါသည်။
ဒွါရအားလုံး ၆-ဒွါရ၌ ဖြစ်သောစိတ်များမှာ –
(က) ၆-ဒွါရ၌ အမြဲဖြစ်သောစိတ်
သောမနဿသန္တီရဏစိတ် = ၁-ပါး
မနောဒွါရဝဇ္ဇန်းစိတ် = ၁-ပါး
ကာမဇောစိတ် = ၂၉-ပါး
ပေါင်း = ၃၁-ပါး
(ခ) ၆-ဒွါရ၌ ရံခါဖြစ်သောစိတ်
ဥပက္ခာသန္တီရဏစိတ် = ၂-ပါး (သန္တီရဏကိစ္စနှင့် တဒါရုံကိစ္စတပ်ခိုက်)
မဟာဝိပါက်စိတ် = ၈-ပါး (တဒါရုံကိစ္စတပ်ခိုက်)
ပေါင်း = ၁၀-ပါး
ဒွါရအားလုံး (၆-ဒွါရ)မှ လွတ်သောစိတ်များမှာ –
(က) ၆-ဒွါရမှ အမြဲလွတ်သောစိတ်
မဟဂ္ဂုတ်စိတ် = ၉-ပါး
(ခ) ၆-ဒွါရမှ ရံခါလွတ်သောစိတ်
ဥပေက္ခာသန္တီရဏစိတ် = ၂-ပါး (ပဋိသန္ဓေကိစ္စ၊ ဘဝင်ကိစ္စ၊ စုတိကိစ္စ တပ်ခိုက်)
မဟာဝိပါက်စိတ် = ၈-ပါး (ပဋိသန္ဓေကိစ္စ၊ ဘဝင်ကိစ္စ၊ စုတိကိစ္စ တပ်ခိုက်)
၃။ ဓမ္မာရမ္မဏဟူသည် အဘယ်တရားများကို ခေါ်ဆိုပါသနည်း၊ ယင်းသရုပ်ကို ထုတ်ပြ၍ အာရုံတိုင်း အာရုံပြုသော
စိတ်တို့ကိုလည်း မှန်ကန်အောင် ဖြေဆိုခဲ့ပါ။
ဓမ္မာရမ္မဏ (ဓမ္မာရုံ) ဟူသည်မှာ –
(၁) စိတ် = ၈၉-ပါး
(၂) စေတသိက် = ၅၂-ပါး
(၃) ပသာဒရုပ် = ၅-ပါး
(၄) သုခုမရုပ် = ၁၆-ပါး
(၅) နိဗ္ဗာန် = ၁-ပါး
(၆) ပညတ် = ၁-ပါး
ဟူသော ၆-မျိုးသော တရားတို့ကို ခေါ်ပါသည်။
အာရုံတိုင်း အာရုံပြုနိုင်သောစိတ်တို့မှာ –
(၁) ဝုဋ္ဌော (မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း) = ၁-ပါး
(၂) မဟာကြိယာဉာဏသမ္ပယုတ်စိတ် = ၄-ပါး
(၃) ကြိယာအဘိညာဉ်စိတ် = ၁-ပါး
ပေါင်း စိတ် = ၆-ပါး တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
၁၉၉၄-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ “ခလုတ်ထိမှ အမိတ” ဟုပြောဆိုလေ့ရှိကြရာ ခလုတ်ထိစဉ် နာကျင်မှု ဝေဒနာနှင့်အတူ တကွဖြစ်သော စိတ်ကို ညွှန်ပြ၍ ဟိတ်နှစ်ပါး နှင့် ယှဉ်သောစိတ်တို့ကိုလည်း ယှဉ်ရာဟိတ်နှင့် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ။
ခလုတ်ထိစဉ် နာကျင်မှု (ဒုက္ခ)ဝေဒနာနှင့် အတူတကွဖြစ်သောစိတ်မှာ –
အကုသလဝိပါက် ဒုက္ခသဟဂုတ် ကာယဝိဉာဏ်စိတ် ဖြစ်ပါသည်။
ဟိတ်နှစ်ပါးနှင့်ယှဉ်သော (ဒွိဟိတ်)စိတ်တို့ကို ယှဉ်ရာဟိတ်နှင့် ယှဉ်တွဲပြရသော် –
(၁) လောဘမူစိတ် ၈-ပါး = လောဘဟိတ်၊ မောဟဟိတ်
(၂) ဒေါသမူစိတ် ၂-ပါး = ဒေါသဟိတ်၊ မောဟဟိတ်
(၃) ဉာဏဝိပ္ပယုတ်စိတ် ၁၂-ပါး = အလောဘဟိတ်၊ အဒေါသဟိတ်
ဟူ၍ ဒွိဟိတ်စိတ် ၂၂-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၂။ လူမှာ လူ့ကိစ္စ ရှိသကဲ့သို့ စိတ်မှာလည်း လုပ်ငန်းကိစ္စရှိရာ လုပ်ငန်းကိစ္စ အများဆုံးသော စိတ်တို့ကို ဆိုင်ရာကိစ္စနှင့်တကွ ဖော်ပြ၍၊ ဒွါရငါးပါး၌ဖြစ်သော စိတ်တို့ကိုလည်း ညွှန်ပြပါ။
လုပ်ငန်းကိစ္စအများဆုံးသော စိတ်တို့မှာ – ဥပေက္ခာသန္တီရဏစိတ် ၂-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းစိတ် ၂-ပါး၏ ကိစ္စများမှာ – (၁) ပဋိသန္ဓေကိစ္စ၊ (၂) ဘဝင်ကိစ္စ၊ (၃) သန္တီရဏကိစ္စ၊ (၄) တဒါရုံကိစ္စ၊ (၅) စုတိကိစ္စ ဟူ၍
ဒွါရငါးပါး၌သာ ဖြစ်သောစိတ်တို့မှာ –
ပေါင်း မနောစိတ် = ၃-ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ကာမဂုဏ်အာရုံများ၌သာ မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်သောစိတ်သရုပ်ကို ဖော်ထုတ်ပြီးလျှင် ရူပဘုံ၌ ရနိုင်သော ဝတ္ထုသရုပ်နှင့် ဝိညာဏဓာတ်တို့ကိုလည်း အကျဉ်းချုပ် တင်ပြပါ။
ကာမဂုဏ်အာရုံများ၌သာ မွေ့လျော်ပျော်ပိုက်သော (ကာမဧကန်) စိတ်သရုပ်မှာ –
ဒွေပဉ္စဝိညာဏ် = ၁၀-ပါး
မနောဓာတ် = ၃-ပါး
ပေါင်း (ကာမဧကန်) စိတ် = ၂၅-ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။
ရူပဘုံ၌ရနိုင်သော ဝတ္ထုသရုပ်နှင့် ဝိညာဏဓာတ်မှာ –
(က) အသညသတ်ကြဉ် ရူပ ၁၅-ဘုံ၌ –
(၁) စက္ခုဝတ္ထု = စက္ခုဝိညာဏဓာတ်
(၂) သောတဝတ္ထု = သောတဝိညာဏဓာတ်
(၃) ဟဒယဝတ္ထု = မနောဓာတ်၊ မနောဝိညာဏဓာတ် တို့ ရနိုင်ပါသည်။
(ခ) အသညသတ်ဘုံ၌ – ရနိုင်သော ဝတ္ထုရုပ်လည်း မရှိ၊ ဝိညာဏဓာတ်လည်း မရှိပါ။
၁၉၉၅-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ “သိပ်ဘဝင်မကျဘူး” ဟူသော လူသုံးများလှသည့် စကား၌ “ဘဝင်”အရကို ဖော်ပြ၍၊ စက္ခုဒွါရ၌ဖြစ်သော
“ဘဝင်” အရမှာ –
ပေါင်း ဘဝင်စိတ် = ၁၉-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
စက္ခုဒွါရ၌ ဖြစ်သောစိတ်တို့မှာ –
ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်း = ၁-ပါး
စက္ခုဝိညာဉ်စိတ် = ၂-ပါး
ဝုဋ္ဌော(မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း) = ၁-ပါး
ကာမဇော = ၂၉-ပါး
တဒါရုံ (မဟာဝိပါက်) = ၈-ပါး
ပေါင်း စိတ် = ၄၆-ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ရုပ်မြင်သံကြား ကြည့်ရှုနေစဉ်ခဏ၌ အရုပ်ကိုမြင်ရသောအခါ၊ အသံကိုကြားရသောအခါ တို့ဝယ် ဖြစ်သောစိတ်များကို ဖော်ပြ၍၊ ဉာဏဝိပ္ပယုတ်စိတ် လေးပါးတို့၏ အာရုံများကိုလည်း ညွှန်ပြပါ။
(က) အရုပ်ကို မြင်သောအခါ –
(၁) အကုသလဝိပါက် ဥပေက္ခာသဟဂုတ် စက္ခုဝိညာဏ်စိတ်၊
(၂) အဟ်ိတ်ကုသလဝိပါက် ဥပေက္ခာသဟဂုတ် စက္ခုဝိညာဏ်စိတ်၊
ပေါင်း ၂-ပါးတို့မှ တစ်ပါးပါး ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
(ခ) အသံကိုကြားသောအခါ –
(၁) အကုသလဝိပါက် ဥပေက္ခာသဟဂုတ် သောတဝိညာဏ်စိတ်၊
(၂) အဟိတ်ကုသလဝိပါက် ဥပေက္ခာသဟဂုတ် သောတဝိညာဏ်စိတ်
ဉာဏဝိပ္ပယုတ် (ကာမာဝစရဇော) စိတ်လေးပါးတို့၏ အာရုံမှာ –
လောကုတ္တရာကြဉ် အလုံးစုံသောအာရုံ (တစ်နည်း) လောကီစိတ်-၈၁၊ စေတသိက်-၅၂၊ ရုပ်-၂၈၊ ပညတ်ဟု ဆိုအပ်သော အာရုံ ၆-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၃။ “သွားလည်းဒီစိတ်၊ စားလည်းဒီစိတ်” ဟုဆိုရာ၌ စိတ်ဟူသော ဝိညာဏ်သည် မည်သည့်အရာ၌ တည်ရှိသည်ကို မှန်ကန်စွာ ညွှန်ပြ၍၊ ပသာဒဝတ္ထုရုပ် ငါးပါးကို မှီသော စိတ်သရုပ် တို့ကိုလည်း ဖော်ပြပါ။
စိတ်ဟူသော ဝိညာဏ်သည် – စိတ်၊ စေတသိက် တို့၏ တည်ရာ မှီရာ ဝတ္ထုရုပ် ၆-ပါး တို့၌ တည်ရှိပါသည်။
ဝတ္ထုရုပ် ၆-ပါးမှာ –
(၁) စက္ခုဝတ္ထု = စက္ခုပသာဒရုပ်
(၂) သောတဝတ္ထု = သောတပသာဒရုပ်
(၃) ဃာနဝတ္ထု = ဃာနပသာဒရုပ်
(၄) ဇိဝှါဝတ္ထု = ဇိဝှါပသာဒရုပ်
(၅) ကာယဝတ္ထု = ကာယပသာဒရုပ်
(၆) ဟဒယဝတ္ထု = ဟဒယရုပ် တို့ဖြစ်ပါသည်။
ပသာဒဝတ္ထုရုပ် ၅-ပါးကို မှီသောစိတ်သရုပ်မှာ –
(၁) စက္ခုဝိညာဏ်ဒွေးသည် = စက္ခုဝတ္ထုကို မှီ၏။
(၂) သောတဝိညာဏ်ဒွေးသည် = သောတဝတ္ထုကို မှီ၏။
(၃) ဃာနဝိညာဏ်ဒွေးသည် = ဃာနဝတ္ထုကို မှီ၏။
(၄) ဇိဝှါဝိညာဏ်ဒွေးသည် = ဇိဝှါဝတ္ထုကို မှီ၏။
(၅) ကာယဝိညာဏ်ဒွေးသည် = ကာယဝိတ္ထုကို မှီ၏။
၁၉၉၆-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ အလုပ်ကိစ္စ အများဆုံး တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်နေသော စိတ်တို့ကို တစ်ခုချင်း ဖော်ပြ၍၊ စာဖြေသူတို့ ပိုင်ဆိုင်ထားသော ခန္ဓာအိမ်ဝယ် တည်ရှိသည့် တံခါးခြောက်ပေါက်၌ အစဉ်ထာဝရ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သော စိတ်တိုိ့ကိုလည်း ရေတွက် ဖော်ပြပါ။
အလုပ်ကိစ္စ အများဆုံး တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသော စိတ်တို့မှာ –
(၁) အကုသလဝိပါက် ဥပေက္ခာသန္တီရဏစိတ် နှင့်
(၂) အဟိတ်ကုသလဝိပါက် ဥပေက္ခာသန္တီရဏစိတ် တို့ဖြစ်ပါသည်။
ခန္ဓာအိမ်ဝယ် တည်ရှိသည့် တံခါးခြောက်ပေါက်၌ အစဉ်ထာဝရ ဝင်ထွက်သွားလာနိုင်သော စိတ်တို့မှာ –
သောမနဿ သန္တီရဏစိတ် = ၁-ပါး
ပေါင်း စိတ် = ၃၁-ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဤမေးခွန်းလွှာကို ကြည့်ရှုနေစဉ်ခဏဝယ် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဝိညာဏဓာတ်ကို မှီရာဝတ္ထုနှင့် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပြီးလျှင် နှလုံးသား(ဟဒယဝတ္ထု)ကို လုံးဝမမှီသော စိတ်တို့ကိုလည်း ပြည့်စုံစွာ ရေးသားပါ။
ဤမေးခွန်းလွှာကို ကြည့်ရှုနေစဉ်ခဏဝယ် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဝိညာဏဓာတ်မှာ –
စက္ခုဝိညာဏဓာတ်ဖြစ်ပြီး၊ စက္ခုဝတ္ထုကို မှီမည်ဖြစ်ပါသည်။
နှလုံးသား (ဟဒယဝတ္ထု) ကို လုံးဝမမှီသော စိတ်တို့မှာ –
အရူပဝိပါက်စိတ် = ၄-ပါး
ပေါင်း စိတ် = ၁၄-ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။
၃။ “အာရုံတွေ သိပ်များနေတယ်” ဟူသော လူသုံးများလှသည့် စကား၌ အာရုံတို့၏ သရုပ်ကို ထုတ်ပြ၍
သောမနဿသန္တီရဏစိတ်၏ ဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စ၊ မွေ့လျော်ရာအာရုံတို့ကိုလည်း တိကျစွာ ဖြေဆိုပါ။
“အာရုံတွေ သိပ်များနေတယ်” ဟူသော လူသုံးများလှသည့် စကား၌ အာရုံတို့၏ သရုပ်ကို ထုတ်ပြရသော် –
(၁) ရူပါရုံ (ရူပါရုံရုပ် ၁-ပါး)
(၂) သဒ္ဒါရုံ (သဒ္ဒါရုံရုပ် ၁-ပါး)
(၃) ဂန္ဓာရုံ (ဂန္ဓာရုံရုပ် ၁-ပါး)
(၄) ရသာရုံ (ရသာရုံရုပ် ၁-ပါး)
(၅) ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ (ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံရုပ် ၃-ပါး)
(၆) ဓမ္မာရုံ (စိတ်-၈၉၊ စေတသိက်-၅၂၊ ပသာဒရုပ်-၅၊ သုခုမရုပ်-၁၆၊ နိဗ္ဗာန်၊ ပညတ်) ဟူ၍ အာရုံ ၆-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
သောမနဿ သန္တီရဏ စိတ်၏ –
(က) ဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စ = သန္တီရဏကိစ္စ၊ တဒါရုံကိစ္စ တို့ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) မွေ့လျော်ရာအာရုံ = ကာမစိတ်-၅၄၊ စေတသိက်-၅၂၊ ရုပ်-၂၈ ဟုဆိုအပ်သော ကာမအာရုံ ၆-ပါးကို (ဧကန်)
၁၉၉၇-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ ဝေဒနာတို့သည် အာရမ္မဏာနုဘဝနနည်းအားဖြင့် သုံးပါးပြားရာ ယင်းနည်းဖြင့် စိတ်အကျယ် ၁၂၁-ပါးကို ဝေဖန်ပြ၍၊ ဟိတ် ၃-ပါးနှင့် ယှဉ်သောစိတ်တို့ကိုလည်း ယှဉ်ရာဟိတ်နှင့်တကွ ဖော်ပြပါ။
စိတ်အကျယ် ၁၂၁-ပါးကို အာရမ္မဏာနုဘဝနနည်းအရ ဝေဒနာ ၃-ပါး အပြားအားဖြင့် ဝေဖန်ပြရသော် –
(၁) သုခသဟဂုတ်စိတ် = ၆၃-ပါး
(၂) ဒုက္ခသဟဂုတ်စိတ် = ၃-ပါး
(၃) အဒုက္ခ-မသုခ(ဥပေက္ခာ) သဟဂုတ်စိတ် = ၅၅-ပါး ဟူ၍ ဖြစ်ပါသည်။
ဟိတ် ၃-ပါးနှင့် ယှဉ်သော (တိဟိတ်)စိတ်တို့ကို ယှဉ်ရာဟိတ်နှင့်တကွ ဖော်ပြရသော် –
ကာမသောဘန ဉာဏသမ္ပယုတ်စိတ် ၁၂-ပါး = အလောဘဟိတ်၊ အဒေါသဟိတ်၊ အမောဟဟိတ်
မဟဂ္ဂုတ်စိတ် ၂၇-ပါး = အလောဘဟိတ်၊ အဒေါသဟိတ်၊ အမောဟဟိတ်
လောကုတ္တရာစိတ် (အကျဉ်း-၈၊ အကျယ် ၄၀-ပါး) = အလောဘဟိတ် ၊ အဒေါသဟိတ် ၊ အမောဟဟိတ်
ဟူ၍ တိဟိတ်စိတ် အကျဉ်း ၄၇-ပါး / အကျယ် ၇၉-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၂။ စိတ်တို့၏ လုပ်ငန်းကိစ္စများစွာရှိရာတွင် နှစ်ကိစ္စကိုသာ ဆောင်ရွက်သော စိတ်တို့ကိုဆိုင်ရာ ကိစ္စနှင့် တွဲစပ်ဖော်ပြ၍၊ ဒွါရခြောက်ပါး၌ ရံခါဖြစ်၍၊ ရံခါမဖြစ်သော စိတ်များကိုလည်း ညွှန်ပြပါ။
နှစ်ကိစ္စကိုသာ ဆောင်ရွက်သော စိတ်တို့ကို ဆိုင်ရာကိစ္စနှင့် တွဲစပ်ဖော်ပြရသော် –
သောမနဿသန္တီရဏစိတ် = သန္တီရဏကိစ္စ + တဒါရုံကိစ္စ
(၂) မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ် = ဝုဋ္ဌောကိစ္စ + အာဝဇ္ဇန်းကိစ္စ
ဒွါရခြောက်ပါး၌ ရံခါဖြစ်၍၊ ရံခါမဖြစ်သောစိတ်များမှာ –
(၁) ဥပေက္ခာသန္တီရဏစိတ် = ၂-ပါး
(၂) မဟာဝိပါက်စိတ် = ၈-ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။
(၁) ဥပေက္ခာသန္တီရဏစိတ် ၂-ပါးသည် –
(သန္တီရဏကိစ္စနှင့် တဒါရုံကိစ္စ) တပ်ခိုက် ဒွါရခြောက်ပါး၌ ဖြစ်ပြီး၊
(ပဋိသန္ဓေကိစ္စ၊ ဘဝင်ကိစ္စ၊ စုတိကိစ္စ) တပ်ခိုက် ဒွါရခြောက်ပါးမှ လွတ်ပါသည်။
(၂) မဟာဝိပါက်စိတ် ၈-ပါး သည် –
(တဒါရုံကိစ္စ)တပ်ခိုက် ဒွါရခြောက်ပါး၌ ဖြစ်ပြီး၊
(ပဋိသန္ဓေကိစ္စ၊ ဘဝင်ကိစ္စ ၊ စုတိကိစ္စ) တပ်ခိုက် ဒွါရခြောက်ပါးမှ လွတ်ပါသည်။
၃။ အကောင်းအဆိုး အာရုံမျိုးစုံကို တွေ့မရှောင်ဘဲ အာရုံပြုနိုင်သောစိတ်များကို ထုတ်ဖော်ပြ၍ “မနောဓာတ်”
အမည်တပ်ရသော စိတ်တို့ကိုလည်း မှီရာဝတ္ထုနှင့်တကွ ဖော်ပြပါ။
အကောင်းအဆိုး အာရုံမျိုးစုံကို တွေ့မရှောင်ဘဲ အာရုံပြုနိုင်သော စိတ်များမှာ အလုံးစုံကို အာရုံပြုနိုင်သောစိတ် ၆-
(၁) မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း = ၁-ပါး
(၂) မဟာကြိယာ ဉာဏသမ္ပယုတ်စိတ် = ၄-ပါး
(၃) ကြိယာအဘိညာဉ်စိတ် = ၁-ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။
“မနောဓာတ်” အမည်တပ်ရသောစိတ်တို့ကို မှီရာဝတ္ထုနှင့်တကွ ဖော်ပြရသော် –
(၁) ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ် = ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲမှီ၏။
(၂) သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းဒွေး = ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲမှီ၏။
၁၉၉၈-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ ဝေဒနာအပြားကို ဣနြေ္ဒိယဘေဒနည်းအားဖြင့် ဖော်ပြ၍ (က) စိတ်အကျယ် ၁၂၁-ပါးတို့တွင်
သောမနဿသဟဂုတ်စိတ်ကို ဘူမိဘေဒနည်းအားဖြင့် ခွဲခြားရေတွက်ပြပြီးလျှင် (ခ) ဒွိဟိတ် စိတ်များကိုလည်း ယှဉ်ရာဟိတ် နှင့် တွဲစပ်ပြပါ။
ဝေဒနာအပြားကို ဣနြေ္ဒိယဘေဒနည်းအားဖြင့် ဖော်ပြရသော် –
(၅)	ဥပေက္ခာဝေဒနာ ဟူ၍ ၅ပါး ပြားပါသည်။
(က)	စိတ်အကျယ် ၁၂၁-ပါးတွင် သောမနဿသဟဂုတ်စိတ်ကို ဘူမိဘေဒနည်းအားဖြင့် ခွဲခြားရေတွက်ပြရသော် –
(၁) ကာမာဝစရ သောမနဿသဟဂုတ်စိတ် = ၁၈-ပါး
(၂) ရူပါဝစရ သောမနဿသဟဂုတ်စိတ် = ၁၂-ပါး
(၃) အရူပါဝစရ သောမနဿသဟဂုတ်စိတ် = မရှိ
(၄) လောကုတ္တရာ သောမနဿသဟဂုတ်စိတ် = ၃၂-ပါး
သောမနဿသဟဂုတ်စိတ်ပေါင်း = ၆၂-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
(ခ) [ ၁၉၉၄-ခုနှစ်၊ နံပါတ် (၁)အဖြေ ပြန်ကြည့်ပါ။ ]
၂။ ကိစ္စ ၁၄-ပါးရှိလျက် ကိစ္စဖြစ်ရာဌာနမှာ အဘယ်ကြောင့် ၁၀-ပါးသာ ဖြစ်ရသနည်း၊ ဖြေဆို၍ အလုပ်ကိစ္စ
အနည်းဆုံးစိတ်များကိုလည်း ဆိုင်ရာကိစ္စနှင့် အသီးသီး တွဲစပ် ဖော်ပြပါ။
ကိစ္စ ၁၄-ပါး ရှိပါလျက် ကိစ္စဖြစ်ရာဌာန ၁၀-ပါးသာ ဖြစ်ရခြင်းမှာ –
ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းနှင့် သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းတို့၏ အကြား၌ဖြစ်ရာ ဌာနချင်းတူ၍ စက္ခုဝိညာဏ် စသော ဝိညာဏ် ၅-ပါး၏
ဖြစ်ရာဌာနကို “ပဉ္စဝိညာဏ်ဌာန” ဟု တစ်ဌာနတည်း ပေါင်း ယူရသောကြောင့် ကိစ္စ ၁၄-ပါးရှိသော်လည်း ဌာနမှာ ၁၀-ပါးသာ ဖြစ်ရပါသည်။
အလုပ်ကိစ္စအနည်းဆုံးသော စိတ်များကို ဆိုင်ရာကိစ္စနှင့် အသီးသီး တွဲစပ်ပြရသော် –
တစ်ကိစ္စသာတပ်သောစိတ် ၆၈-ပါး	ဆိုင်ရာကိစ္စ
(က) ဒွေပဉ္စဝိညာဉ် ၁၀ပါး-တို့တွင်
စက္ခုဝိညာဉ်ဒွေးသည်	= ဒဿနကိစ္စ၊
သောတဝိညာဉ်ဒွေးသည်	= သဝနကိစ္စ၊
ဃာနဝိညာဉ်ဒွေးသည်	= ဃာယနကိစ္စ၊
ဇိဝှါဝိညာဉ်ဒွေးသည်	= သာယနကိစ္စ၊
ကာယဝိညာဉ်ဒွေးသည်	= ဖုသနကိစ္စ၊
(ခ) မနောဓာတ် ၃-ပါးတွင်
ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းသည်	= အာဝဇ္ဇန်းကိစ္စ၊
သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းဒွေးသည်	= သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းကိစ္စ၊
(ဂ) ဇော ၅၅-ပါးသည် = ဇောကိစ္စ ဟူ၍
= ပေါင်း ၆၈-ပါးသော စိတ်တို့သည် အသီးသီး ၁-ကိစ္စစီသာ တပ်ကြပါသည်။
၃။ လောက၌ ရှိသမျှဥဿုံ အလုံးစုံသော အာရုံတို့တွင် အကျယ်ဝန်းဆုံးဖြစ်သော အာရုံကို သရုပ်နှင့်တကွ ဖော်ပြ၍၊ ယင်းအာရုံကို ယူနိုင်သော စိတ်များကို ဖြစ်ရာ ဒွါရ၊ မှီရာဝတ္ထုတို့နှင့် တွဲစပ်ဖြေဆိုပါ။
လောက၌ ရှိသမျှဥဿုံ အလုံးစုံသော အာရုံတို့တွင် အကျယ်ဝန်းဆုံးဖြစ်သော အာရုံမှာ – “ဓမ္မာရုံ” ဖြစ်ပါသည်။
အကြောင်းမှာ – အာရုံ ၆-ပါးတွင် ရူပါရုံစသော အာရုံငါးပါးတို့မှာ ရုပ်ပရမတ်တစ်မျိုးတည်းသာ ဖြစ်ကြပြီး၊ ဓမ္မာရုံ၌ကား
ရုပ်၊ နာမ်၊ ပရမတ်အပြင် ပညတ်လည်း ပါဝင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ဓမ္မာရုံ သရုပ်မှာ –
စိတ် ၈၉-ပါး၊ စေတသိက် ၅၂-ပါး၊ ပသာဒရုပ် ၅-ပါး၊ သုခုမရုပ် ၁၆-ပါး၊ နိဗ္ဗာန်နှင့် ပညတ်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ဓမ္မာရုံကို ယူနိုင်သော စိတ်မှာ –
မနောဒွါရိကစိတ် ၆၇-ပါး ဖြစ်သော
တဒါရုံစိတ် = ၁၁-ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းစိတ်တို့၏ ဖြစ်ရာဒွါရမှာ – မနောဒွါရ ဖြစ်ပါသည်။
ယင်းစိတ်တို့၏ မှီရာဝတ္ထုမှာ –
ပဉ္စဝေါကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုက် – ဟဒယဝတ္ထုရုပ်ကို မှီပြီး၊
စတုဝေါကာရဘုံ၌ဖြစ်ခိုက် – မည်သည့်ဝတ္ထုရုပ်ကိုမှ မမှီပါ။
၁၉၉၉-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ စိတ်၏ဆောင်ရွက်ဖွယ်ကိစ္စ ၁၄-ပါးရှိရာဝယ် ကိစ္စအများကို မဆောင်ရွက်ဘဲ တစ်ကိစ္စတည်းကိုသာ ဆောင်ရွက်သည့် စိတ်တို့ကို ရေတွက်ပြ၍၊ ဟိတ်ခြောက်ပါးတို့တွင် ကုသိုလ်ဟိတ် သုံးပါးကိုလည်း ဖော်ပြပါ။
တစ်ကိစ္စသာ ဆောင်ရွက်သောစိတ်တို့မှာ –
ဒွေပဉ္စဝိညာဏ်	= ၁၀-ပါး
မနောဓာတ် = ၃-ပါး (ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်း-၁ + သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းဒွေး)
ပေါင်း ၁-ကိစ္စတပ်သောစိတ် = ၆၈-ပါး
ကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးမှာ – အလောဘဟိတ်
၂။ စာဖြေသူများ ပိုင်ဆိုင်ထားသည့် ဒွါရခြောက်ပါး၌ လုံးဝ ဝင်ထွက်သွားလာခွင့် မရသော စိတ်တို့ကို ရေးသား၍၊
ဟသိတုပ္ပါဒ်စိတ်၏ ဆောင်ရွက်သည့် ကိစ္စ၊ ပျော်မွေ့သည့် အာရုံတို့ကိုလည်း ဖြေဆိုပါ။
ဒွါရခြောက်ပါး၌ လုံးဝ ဝင်ထွက်သွားလာခွင့် မရသောစိတ်တို့မှာ –
ပဋိသန္ဓေကိစ္စ၊ ဘဝင်ကိစ္စ၊ စုတိကိစ္စတို့ကိုသာ ဆောင်ရွက်ကြသော မဟဂ္ဂုတ်ဝိပါက် စိတ် ၉-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
(က) ဆောင်ရွက်သည့်ကိစ္စ	= ဇောကိစ္စ
(ခ) ပျော်မွေ့သည့်အာရုံ	= ကာမအာရုံတို့ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ရုပ်မြင်သံကြားကို ကြည့်ရှုနေစဉ်ခဏ၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော မြင်သိစိတ်၊ ကြားသိစိတ်တို့၏ မှီရာဝတ္ထုတို့ကို ဖော်ပြ၍၊ ဝတ္ထုရုပ်ခြောက်ပါးကိုလည်း ကာမဘုံ၊ ရူပဘုံ၊ အရူပဘုံအားဖြင့် ဝေဖန်ပြပါ။
ရုပ်မြင်သံကြား ကြည့်ရှုနေစဉ်ခဏ၌ …
မြင်သိစိတ် = အကုသလဝိပါက် ဥပေက္ခာသဟဂုတ် စက္ခုဝိညာဏ်	စက္ခုဝတ္ထု
အဟိတ်ကုသလဝိပါက် ဥပေက္ခာသဟဂုတ် စက္ခုဝိညာဏ်
ကြားသိစိတ် = အကုသလဝိပါက် ဥပေက္ခာသဟဂုတ် သောတဝိညာဏ် သောတဝတ္ထု
အဟိတ်ကုသလဝိပါက် ဥပေက္ခာသဟဂုတ် သောတဝိညာဏ်
ဝတ္ထုရုပ် ၆-ပါးကို ဘုံအလိုက် ဝေဖန်ရသော် –
၁။ ကာမဘုံ	ဝတ္ထုရုပ် ၆-ပါးလုံး
(က) အသညသတ်ကြဉ် ရူပ ၁၅-ဘုံ	စက္ခုဝတ္ထု၊ သောတဝတ္ထု၊ ဟဒယဝတ္ထု၊
(ခ) အသညသတ်ဘုံ	မရှိပါ
၃။ အရူပဘုံ	မရှိပါ
၂၀၀၀-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းကို “ဝုဋ္ဌော” ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အခါကို ဖြေဆို၍၊ စက္ခုဒွါရ၌ ဖြစ်သော စိတ် (၄၆)ပါးကိုလည်း မမှားအောင် ရေတွက်ဖော်ပြပါ။
မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းကို “ဝုဋ္ဌော” ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သည့်အခါမှာ – ပဉ္စဒွါရ၌ထင်လာသော ပဉ္စာရုံကို သာယာဖွယ်၊
မသာယာဖွယ် ဟု ပိုင်းခြားမှတ်သား ဆုံးဖြတ်ခြင်းကိစ္စ ဖြစ်ရာအခါ၌ ဖြစ်ပါသည်။
စက္ခုဒွါရ၌ဖြစ်သော စိတ် (၄၆)ပါးမှာ –
စက္ခုဝိညာဏ် = ၂-ပါး
သမ္ပဋိုစ္ဆိုင်း = ၂-ပါး
သန္တီရဏ = ၃-ပါး
ဝုဋ္ဌော = ၁-ပါး
တဒါရုံ (မဟာဝိပါက်) = ၈-ပါး
ပေါင်း စိတ် = ၄၆-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၂။ စာဖြေသူများ ပိုင်ဆိုင်ထားသော ခန္ဓာအိမ်ဝယ် တည်ရှိသော ဒွါရခြောက်ပါး၌ အစဉ်ထာဝရ ဝင်ထွက်ခွင့်ရသော စိတ်တို့ကို ဖော်ပြ၍၊ အာရုံ ၆-ပါးတို့တွင် အကျယ်ဝန်းဆုံးဖြစ်သော ဓမ္မာရုံသရုပ်ကိုလည်း ထုတ်ဖော်တင်ပြပါ။
ဒွါရခြောက်ပါး၌ အစဉ်ထာဝရ ဝင်ထွက်ခွင့်ရသော စိတ်တို့မှာ –
မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း = ၁-ပါး
သောမနဿသန္တီရဏ = ၁-ပါး
ပေါင်း စိတ် = ၃၁-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
အာရုံ ၆-ပါးတို့တွင် အကျယ်ဝန်းဆုံးဖြစ်သော ဓမ္မာရုံသရုပ်မှာ –
၁.	စိတ် = ၈၉-ပါး
၂.	စေတသိက် = ၅၂-ပါး
၃.	ပသာဒရုပ် = ၅-ပါး
၄.	သုခုမရုပ် = ၁၆-ပါး
၅.	နိဗ္ဗာန် = ၁-ပါး
၆.	ပညတ် = ၁-ပါး
ပေါင်း ဓမ္မာရုံထိုက်သောတရား = ၁၆၄-ပါး [ အကျဉ်း (၆)ပါး၊ အကျယ် (၁၆၄)ပါး ]
၃။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် သူတော်စင်များသည် “နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက်ပြုရပါလို၏” ဟု ဆုတောင်း တတ်ကြရာ နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက် (ဧကန်အာရုံ) ပြုနိုင်သည့် စိတ်ကိုလည်း တိကျစွာ ဖြေဆို၍ အသညသတ်ကြဉ်သော ရူပ(၁၅)ဘုံ၌ ရနိုင်သည့် ဝတ္ထုရုပ်နှင့် ဝိညာဏဓာတ်တို့ကိုလည်း ဖြေဆိုပါ။
နိဗ္ဗာန်ကို မျက်မှောက် (ဧကန်အာရုံ) ပြုနိုင်သည့် စိတ်မှာ –
“လောကုတ္တရာစိတ် ၈-ပါး” ဖြစ်ပါသည်။
အသညသတ်ကြဉ်သော ရူပ (၁၅)ဘုံ၌ ရနိုင်သည့် ဝတ္ထုရုပ်နှင့် ဝိညာဏဓာတ်တို့မှာ –
ဝတ္ထုရုပ် ၃-ပါး ဝိညာဏဓာတ် ၄-ပါး
စက္ခုဝတ္ထု	= စက္ခုဝိညာဏဓာတ်
သောတဝတ္ထု	= သောတဝိညာဏဓာတ်
ဟဒယဝတ္ထု	= မနောဓာတ်
၂၀၀၁-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ ဒုစရိုက်လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရန် အခြေခံ အမြစ်ရင်းသဖွယ်ဖြစ်သော အကုသိုလ်ဟိတ်တို့ကို ဖြေဆို၍၊ ဒွိဟိတ်စိတ် ၂၂-ပါးကိုလည်း ရေတွက်ပြပါ။
ဒုစရိုက်လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ရန် အခြေခံ အမြစ်ရင်းသဖွယ်ဖြစ်သော အကုသိုလ်ဟိတ်တို့မှာ –
လောဘဟိတ်၊ ဒေါသဟိတ်၊ မောဟဟိတ် တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဒွိဟိတ်စိတ် ၂၂-ပါးကိုလည်း ရေတွက်ပြရသော် –
လောဘမူစိတ် = ၈-ပါး
ဒေါသမူစိတ် = ၂-ပါး
ကာမသောဘန ဉာဏဝိပ္ပယုတ်စိတ် = ၁၂-ပါး
ပေါင်း ဒွိဟိတ်စိတ် = ၂၂-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၂။ လူ့ခန္ဓာအိမ်ရှိ တံခါးခြောက်ပေါက်ကို အစဉ်တကျ ရေတွက်ပြ၍ ယင်း တံခါးခြောက်ပေါက်ဝယ် လုံးဝ ဝင်ထွက်ခွင့် မရသောစိတ်ကိုလည်း ဖော်ပြပါ။
လူ့ခန္ဓာအိမ်ရှိ တံခါးခြောက်ပေါက်ကို အစဉ်တကျ ရေတွက်ပြရသော် –
(၆)	မနောဒွါရ တို့ဖြစ်ပါသည်။
ယင်း တံခါးခြောက်ပေါက်ဝယ် လုံးဝ ဝင်ထွက်ခွင့် မရသောစိတ်မှာ – “မဟဂ္ဂုတ်ဝိပါက်စိတ် ၉-ပါး” ဖြစ်ပါသည်။
၃။ ရုပ်မြင်သံကြားကို ကြည့်ရှုနားထောင်နေစဉ်ခဏ၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော ဝိညာဏဓာတ်နှစ်ပါးကို မှီရာဝတ္ထုနှင့်တကွ
တွဲစပ်ဖော်ပြ၍၊ ဟဒယဝတ္ထုရုပ်ကို အမြဲမှီသောစိတ်များကို ဖော်ပြပါ။
ရုပ်မြင်သံကြားကို ကြည့်ရှုနားထောင်နေစဉ်ခဏ၌ ဖြစ်ပေါ်နေသော ဝိညာဏဓာတ်နှစ်ပါးနှင့် မှီရာဝတ္ထုတို့မှာ –
(ကြည့်ရှုစဉ်)	စက္ခုဝိညာဏဓာတ် = စက္ခုဝတ္ထု
(နားထောင်စဉ်)	သောတဝိညာဏဓာတ်	= သောတဝတ္ထု
ဟဒယဝတ္ထုရုပ်ကို အမြဲမှီသောစိတ်များမှာ –
သန္တီရဏ = ၃-ပါး
ဟသိတုပ္ပါဒ် = ၁-ပါး
မဟာဝိပါက် = ၈-ပါး
ရူပစိတ် = ၁၅-ပါး
သောတာပတ္တိမဂ် = ၁-ပါး
ပေါင်း ဟဒယဝတ္ထုရုပ်ကို အမြဲမှီသောစိတ် = ၃၃-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၀၂-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ “တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြသည်” ဆိုသည့်အတိုင်း ပကိဏ်းက တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်မည့် အကျဉ်းချုပ်ခေါင်းစဉ် ၆-ခုကို ဖော်ပြ၍၊ အဗျာကတဟိတ် ၃-ပါးကိုလည်း ရေးသားပြီး၊ “ကိစ္စများမြောင် လူတို့ဘောင်” ဟု ဆိုသော်လည်း အဘိဓမ္မာအမြင်ဖြင့် ကြည့်ပါက ကိစ္စမည်မျှ ရှိသည်ိကို ရေတွက်ပြခဲ့ပါ။
“တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြသည်” ဆိုသည့်အတိုင်း ပကိဏ်းက တာဝန်ယူလုပ်ဆောင်မည့် အကျဉ်းချုပ်ခေါင်းစဉ် ၆-ခုမှာ –
(၆)	ဝတ္ထုသင်္ဂဟ တို့ဖြစ်ပါသည်။
အဗျာကတဟိတ် ၃-ပါးမှာ –
အလောဘဟိတ်၊ အဒေါသဟိတ်၊ အမောဟဟိတ် တို့ဖြစ်ပါသည်။
“ကိစ္စများမြောင် လူတို့ဘောင်” ဟု ဆိုသော်လည်း အဘိဓမ္မာအမြင်ဖြင့် ကြည့်ပါက – ကိစ္စ ၁၄-ပါးသာ ရှိပါသည်။
၎င်းတို့ကို ရေတွက်ပြရသော် –
(၁)	ပဋိသန္ဓေကိစ္စ (၈) ဖုသနကိစ္စ
(၂) ဘဝင်ကိစ္စ (၉) သမ္ပဋိုစ္ဆိုင်းကိစ္စ
(၃)	အာဝဇ္ဇန်းကိစ္စ (၁၀) သန္တီရဏကိစ္စ
(၄)	ဒဿနကိစ္စ (၁၁) ဝုဋ္ဌောကိစ္စ
(၅)	သဝနကိစ္စ (၁၂) ဇောကိစ္စ
(၆)	ဃာယနကိစ္စ (၁၃) တဒါရုံကိစ္စ
(၇)	သာယနကိစ္စ (၁၄) စုတိကိစ္စ တို့ ဖြစ်ပါသည်။
၂။ “ဘဝင်ခိုက်သွားပြီ ဘဝင်ခိုက်သွားပြီ” ဟု ပြောဆိုတတ်ကြရာ ၎င်းဘဝင်ကို အဘယ်ဒွါရ ဟု ခေါ်၍၊ ယင်းဒွါရ၌ ဖြစ်သော စိတ်သရုပ်ကိုလည်း ရေတွက်ပြခဲ့ပါ။
“ဘဝင်ခိုက်သွားပြီ ဘဝင်ခိုက်သွားပြီ” ဟု ပြောဆိုတတ်ကြရာ –
ဘဝင်စိတ်တို့၏ အဆုံးဖြစ်သော ဘဝင်္ဂုပစ္ဆေဒစိတ် ၁၉-ပါးကို မနောဒွါရ ဟု ခေါ်ဆိုပါသည်။
၎င်း မနောဒွါရ၌ဖြစ်သော စိတ်သရုပ်တို့မှာ –
အပ္ပနာဇော = ၂၆-ပါး
တဒါရုံ = ၁၁-ပါး
ပေါင်း စိတ် = ၆၇-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၃။ “နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြု၍ လှူကြ တမ်းကြ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြ” ဟု တိုက်တွန်းကြရာ နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုနိုင်သော စိတ်တို့ကို ကုန်စင်အောင် ဖော်ပြခဲ့ပါ။
“နိဗ္ဗာန် အာရုံပြု၍ လှူကြ တမ်းကြ ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြ” ဟု တိုက်တွန်းကြရာ နိဗ္ဗာန်ကို အာရုံပြုနိုင်သော စိတ်များမှာ –
နိဗ္ဗာန် (ဧကန်) အာရုံပြုစိတ် = လောကုတ္တရာစ်ိတ် = ၈-ပါး
နိဗ္ဗာန် (အနေကန်) အာရုံပြုစိတ် = မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ် = ၁-ပါး
မဟာကြိယာ ဉာဏသမ္ပယုတ်စိတ် = ၄-ပါး
အဘိညာဉ်စိတ် = ၂-ပါး
ပေါင်း (အနေကန်) အာရုံပြုစိတ် = ၁၁-ပါး တို့ဖြစ်ပါသည်။
၄။ “ဒေါသရှေ့ထား မှားတတ်သည်ဖြစ်ရာ” ၎င်းဒေါသနှင့် ယှဉ်သောစိတ်ကို ဖော်ပြ၍၊ ယင်းစိတ်ကို ကိစ္စ၊ ဒွါရ၊ အာရုံ၊ ဝတ္ထုဖြင့် ဝေဖန်ပြပါ။
“ဒေါသရှေ့ထား မှားတတ်သည်ဖြစ်ရာ” ၎င်းဒေါသနှင့် ယှဉ်သောစိတ်မှာ – ဒေါသမူစိတ် ၂-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းဒေါသမူစိတ်၏ ကိစ္စ = ဇောကိစ္စ၊
ဒွါရ = ၆-ဒွါရမြဲ၊
အာရုံ = လောကီစိတ် (၈၁)၊ စေတသိက် (၅၂)၊ ရုပ် (၂၈)၊ ပညတ်ဟူသော အာရုံ ၆-ပါး
ဝတ္ထု = ဟဒသဝတ္ထု၊
၂၀၀၃-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ “ခံစားမှုဝေဒနာ ကိုယ်စီရှိကြသည်” ဟု ဆိုရာ ထိုဝေဒနာသည် အဘယ်ဘေဒဖြင့် မည်မျှများပြားသည်ကို ဖြေဆို၍၊ ကိစ္စ (၁၄)ပါး၊ ဌာန (၁၀)ပါးဟုရှိရာ ကိစ္စ နှင့် ဌာန တို့ကို အသီးသီး တွဲစပ်ပြပါ။
“ခံစားမှုဝေဒနာ ကိုယ်စီရှိကြသည်” ဟု ဆိုရာ ထိုဝေဒနာသည် –
ကိစ္စနှင့်ဌာနတို့ကို အသီးသီး တွဲစပ်ပြရသော် –
[ ၁၉၉၃-ခုနှစ်၊ နံပါတ် (၁)အဖြေ ပြန်ကြည့်ပါ။ ]
၂။ ဇောကိစ္စထိုက်သော အဟိတ်စိတ်ကို ဖော်ပြပြီး၊ ပဉ္စဝတ္ထုကို အမြဲမှီသော စိတ်တို့ကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့ပါ။
ဇောကိစ္စထိုက်သော အဟိတ်စိတ်မှာ – “ဟသိတုပ္ပါဒ်စိတ်” ဖြစ်ပါသည်။
ပဉ္စဝတ္ထုကို အမြဲမှီသော စိတ်တို့မှာ – “ဒွေပဉ္စဝိညာဏ် ၁၀-ပါး” ဖြစ်ပါသည်။
၃။ သဗ္ဗာကုသလယောဂီစေတသိက်များကို ဖော်ပြ၍ ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲမှီသောစိတ်နှင့် လုံးဝ မမှီသောစိတ်တို့ကို လည်း ဖော်ပြခဲ့ပါ။
သဗ္ဗစိတ္တသာဓာရဏ စေတသိက် = ၇-ပါး
(ဝိတက်၊ ဝီစာရ၊ ဝီရိယ) ပကိဏ်း စေတသိက် = ၃-ပါး
သဗ္ဗာကုသလသာဓာရဏစေတသိက် = ၄-ပါး (မောဟ၊ အဟိရိက ၊ အနောတ္တပ္ပ ၊ ဥဒ္ဓစ္စ)
ပေါင်း = ၁၄-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲမှီသောစိတ်မှာ –
ပေါင်း = ၃၃-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
ဟဒယဝတ္ထုကို လုံးဝမမှီသောစိတ်မှာ –
၂၀၀၄-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ “ခံစားမှု ကိုယ်စီရှိကြသည်” ဟူသောစကား၌ “ခံစားမှု” ဟူသည် မည်သည့် တရားကို ခေါ်ပါသနည်း၊ ထိုတရားသည် အဘယ်နည်းအားဖြင့် ဘယ်နှစ်ပါး ပြားပါသနည်း၊ ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြပါ။
“ခံစားမှု ကိုယ်စီရှိကြသည်” ဟူသောစကား၌ “ခံစားမှု” ဟူသည် – “ဝေဒနာစေတသိက်” တရားကို ခေါ်ပါသည်။
ထို ဝေဒနာသည် –
(၃) အဒုက္ခ – မသုခဝေဒနာ
(၅) ဥပေက္ခာဝေဒနာ – ဟူ၍
အာရမ္မဏာနုဘဝနလက္ခဏဘေဒနည်းအရ- (၃)ပါး ၊ ဣန္ဒြိယဘေဒနည်းအရ- (၅)ပါး ပြားပါသည်။
၂။ ဟိတ်နှင့်တကွဖြစ်သောတရားတို့ကို ဇာတိဘေဒ (ဇာတ်အပြား)၊ ဘူမိဘေဒ (ဘုံအပြား) တို့ဖြင့် ဝေဖန်ပြပါ။
ဟိတ်နှင့်တကွဖြစ်သောတရား (သဟိတ်စိတ် ၇၁/၁၀၃-ပါး) တို့ကို ဇာတိဘေဒ(ဇာတ်အပြား) အားဖြင့်
စိတ်အကျဉ်း ၊ စိတ်အကျယ်
အကုသိုလ်စိတ် = ၁၂-ပါး ၊ ၁၂-ပါး
ကုသိုလ်စိတ် = ၂၁-ပါး ၊ ၃၇-ပါး
ဝိပါက်စိတ် = ၂၁-ပါး ၊ ၃၇-ပါး
ကြိယာစိတ် = ၁၇-ပါး ၊ ၁၇-ပါး
= ၇၁-ပါး ၊ ၁၀၃-ပါး
ဘူမိဘေဒ (ဘုံအပြား) အားဖြင့် ဝေဖန်ပြရသော် –
ကာမာဝရစိတ် = ၃၆-ပါး ၊ ၃၆-ပါး
ရူပါဝစရစိတ် = ၁၅-ပါး ၊ ၁၅-ပါး
အရူပါဝစရစိတ် = ၁၂-ပါး ၊ ၁၂-ပါး
လာကုတ္တရာစိတ် = ၈-ပါး ၊ ၄၀-ပါး
၃။ “လူတိုင်းမှာ တာဝန်(ကိစ္စ) ကိုယ်စီနဲ့” ဟူသည်နှင့်အညီ စိတ်တိုင်းမှာလည်း တာဝန် ကိုယ်စီ ရှိကြရာ
အခြေအမြစ်မရှိသော စိတ်တို့ကို ၎င်းတို့ပြုလုပ်သော တာဝန်နှင့်တကွ ဖော်ပြပါ။
“လူတိုင်းမှာ တာဝန်(ကိစ္စ) ကိုယ်စီနဲ့” ဟူသည်နှင့်အညီ စိတ်တိုင်းမှာလည်း တာဝန်ကိုယ်စီ ရှိကြရာ အခြေအမြစ်မရှိသော
စိတ် (အဟိတ်စိတ် ၁၈-ပါး) တို့ကို ပြုလုပ်သော တာဝန်နှင့်တကွ ဖော်ပြရသော် –
အဟိတ်စိတ် ၁၈-ပါး ၊ တာဝန် (ကိစ္စ)
(၁) စက္ခုဝိညာဉ်ဒွေ ၊ (၁) ဒဿနကိစ္စ
(၂) သောတဝိညာဉ်ဒွေ ၊ (၂) သဝနကိစ္စ
(၃) ဃာနဝိညာဉ်ဒွေ ၊ (၃) ဃာယနကိစ္စ
(၄) ဇိဝှါဝိညာဉ်ဒွေ ၊ (၄) သာယနကိစ္စ
(၅) ကာယဝိညာဉ်ဒွေ ၊ (၅) ဖုသနကိစ္စ
(၆) သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းဒွေ ၊ (၆) သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းကိစ္စ
(၇) ဥပေက္ခာသန္တီရဏ-၂ ၊ (၇) ပဋိသန္ဓေကိစ္စ၊ ဘဝင်ကိစ္စ၊ စုတိကိစ္စ၊ သန္တီရဏကိစ္စ ၊ တဒါရုံကိစ္စ
(၈) သောမနဿသန္တီရဏ-၁ ၊ (၈) သန္တီရဏကိစ္စ၊ တဒါရုံကိစ္စ
(၉) မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း ၊ (၉) အာဝဇ္ဇန်းကိစ္စ၊ ဝုဋ္ဌောကိစ္စ
(၁၀) ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်း ၊ (၁၀) အာဝဇ္ဇန်းကိစ္စိ
(၁၁) ဟသိတုပ္ပါဒ်စိတ် ၊ (၁၁) ဇောကိစ္စ
၄။ “စာဖြေရှင် မောင်တို့မယ်တို့ ယခုရောက်ရှိနေသောဘုံကို မည်သည့်ဘုံဟု ခေါ်ပါသနည်း၊ ထိုဘုံ၌ ရရှိနိုင်သော ဝတ္ထုရုပ်နှင့် ဝိညာဏဓာတ်တို့ကို ဖော်ပြပါ။
အကျွန်ုပ်တို့ ယခုရောက်ရှိနေသောဘုံမှာ – လူ့ ဘုံ (ကာမသုဂတိဘုံ) ဖြစ်ပါသည်။
ထိုလူ့ဘုံ (ကာမသုဂတိဘုံ)၌ ရရှိနိုင်သော ဝတ္ထုရုပ်နှင့် ဝိညာဏဓာတ်တို့မှာ –
ဝတ္ထု	၊ ဝိညာဏဓာတ်
(၁) စက္ခုဝတ္ထု	၊ (၁) စက္ခုဝိညာဏဓာတ်
(၂) သောတဝတ္ထု ၊ (၂) သောတဝိညာဏဓာတ်
(၃) ဃာနဝတ္ထု ၊ (၃) ဃာနဝိညာဏဓာတ်
(၄) ဇိဝှါဝတ္ထု ၊ (၄) ဇိဝှါဝိညာဏဓာတ်
(၅) ကာယဝတ္ထု ၊ (၅) ကာယဝိညာဏဓာတ်
(၆) ဟဒယဝတ္ထု ၊ (၆) မနောဓာတ်
၊ (၇) မနောဝိညာဏဓာတ်
၂၀၀၅-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ လူတို့နေရာ အိမ်ဂေဟာကို လက်သမားဆရာသည် တံခါးပေါက်ဖောက်သကဲ့သို့ တဏှာယောက်ျား လက်သမားသည် ခန္ဓာအိမ်အား တံခါးပေါက် မည်မျှဖောက်ခဲ့ကြောင်းကို ထင်ရှားပေါ်လွင်စေရန် သရုပ်သကန်ဖြင့် အဟုတ်အမှန် ထုတ်ပြခဲ့ပါ။
လူတို့နေရာ အိမ်ဂေဟာကို လက်သမားဆရာသည် တံခါးပေါက်ဖောက်သကဲ့သို့ တဏှာယောက်ျား
လက်သမားသည် ခန္ဓာအိမ်အား တံခါးပေါက် ၆-ပေါက် ဖောက်ခဲ့ပါသည်။
ပကတိတံခါးပေါက်သည် လူတို့၏ ဝင်ရောက်ကြောင်းဖြစ်သကဲ့သို့ ခန္ဓာအိမ်၌ စက္ခုပသာဒ စသော
တံခါးပေါက်များသည်လည်း စက္ခုဒွါရိကဝီထိစိတ် စသည်တို့၏ ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်သောကြောင့် ဒွါရ မည်၏-ဟု ဒွါရသင်္ဂဟ၌
ဒွါရအပြား ၆-ပါး ရှိပါသည်၊ သရုပ်သကန် (တရားကိုယ်)ဖြင့် ပြရသော် –
(၁)	စက္ခုဒွါရ = စက္ခုပသာဒရုပ်
(၂)	သောတဒွါရ = သောတပသာဒရုပ်
(၃)	ဃာနဒွါရ = ဃာနပသာဒရုပ်
(၄)	ဇိဝှါဒွါရ = ဇိဝှါပသာဒရုပ်
(၅)	ကာယဒွါရ = ကာယပသာဒရုပ်
(၆)	မနောဒွါရ = ဘဝင်စိတ်တို့၏ အဆုံးဖြစ်သော ဘဝင်္ဂုပစ္ဆေဒစိတ် ၁၉-ပါး
၂။ “အလုပ်မှန်သမျှ ဂုဏ်ရှိစွ” ဆိုသည့်အတိုင်း အလုပ်မှန်သမျှ၊ ဂုဏ်ရှိသည်ဖြစ်ရာ အလုပ်အများဆုံး လုပ်သောစိတ်ကို ဖော်ပြ၍၊ ၎င်းစိတ်ကို ဝေဒနာ၊ ဟိတ်၊ ဒွါရ၊ အာရုံ၊ ဝတ္ထုတို့ဖြင့် ဝေဖန်ခဲ့ပါ။
“အလုပ်မှန်သမျှ ဂုဏ်ရှိစွ” ဆိုသည့်အတိုင်း အလုပ်မှန်သမျှ၊ ဂုဏ်ရှိသည်ဖြစ်ရာ အလုပ်အများဆုံး လုပ်သောစိတ်မှာ-
“ဥပေက္ခာ သန္တီရဏစိတ် ၂-ပါး” ဖြစ်ပါသည်။
၎င်းစိတ်၏ ဝေဒနာ = ဥပေက္ခာဝေဒနာ၊
ဒွါရ = ၆-ဒွါရ (ရံခါ)
အာရုံ = ကာမစိတ် (၅၄)၊ စေတသိက် (၅၂)၊ ရုပ် (၂၈)ဟူသော ကာမအာရုံ ၆-ပါး၊
ဝတ္ထု = ဟဒယဝတ္ထု (မြဲ)၊
၃။ “အာရုံတွေ သ်ိပ်မများနဲ့”ဟု ပြောဆိုကြရာ အာရုံ များ/မများ သိနိုင်ရန် အာရုံတရားများကို ရေတွက်ပြပြီးလျှင်
“ငှက်ပျံရင်းသေ၊ လူကြံရင်းသေ” ဟူသော စကားအရ လူမှန်သမျှ ကြံစည်မှုနှင့် မကင်းနိုင်ရကား ၎င်းကြံစည်မှုနှင့် တကွဖြစ်သော စိတ်တို့ကိုလည်း ရေတွက်ပြပါ။
“အာရုံတွေ သ်ိပ်မများနဲ့”ဟု ပြောဆိုကြရာ အာရုံ များ/မများ သိနိုင်ရန် အာရုံတရားများကို ရေတွက်ပြရသော် –
(၆)	ဓမ္မာရုံ တို့ ဖြစ်ပါသည်။
“ငှက်ပျံရင်းသေ၊ လူကြံရင်းသေ” ဟူသော စကားအရ လူမှန်သမျှ ကြံစည်မှုနှင့် မကင်းနိုင်ရကား ၎င်းကြံစည်မှု
(ဝိတက်စေတသိက်)နှင့် တကွဖြစ်သောစိတ်တို့မှာ –
(ဒွေပဉ္စဝိညာဏ်-၁၀ ကြဉ်သော) ကာမစိတ် ၄၄-ပါး၊ ပထမဈာန်စိတ် ၁၁-ပါး၊ ပေါင်း ၅၅-ပါးသော စိတ်တို့နှင့်တကွ
၂၀၀၆-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ “ဝတ္ထုအာရုံ ကာမဂုဏ်” ဟုဆိုကြရာ ဝတ္ထု (၆)ပါး၊ အာရုံ (၆)ပါး၊ ကာမဂုဏ်တရား (ကာမစိတ် ၅၄-ပါး)တို့ကို ရေတွက်ပြပြီးလျှင်၊ စေတသိက် အနည်းဆုံးယှဉ်သောစိတ်ကို လည်း ဖော်ပြခဲ့ပါ။
“ဝတ္ထုအာရုံ ကာမဂုဏ်” ဟု ဆိုကြရာ ဝတ္ထု (၆)ပါး၊ အာရုံ (၆)ပါး၊ ကာမဂုဏ်တရား (ကာမစိတ် ၅၄-ပါး) တို့မှာ –
ဝတ္ထု (၆)ပါး ၊ အာရုံ (၆)ပါး
(၁) စက္ခုဝတ္ထု ၊ (၁) ရူပါရုံ
(၂) သောတဝတ္ထု ၊ (၂) သဒ္ဒါရုံ
(၃) ဃာနဝတ္ထု ၊ (၃) ဂန္ဓာရုံ
(၄) ဇိဝှါဝတ္ထု ၊ (၄) ရသာရုံ
(၅) ကာယဝတ္ထု ၊ (၅) ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ
(၆) ဟဒယဝတ္ထု ၊ (၆) ဓမ္မာရုံ
အဟိတ်စိတ် = ၁၈-ပါး
ပေါင်း = ၅၄-ပါး
စေတသိက် အနည်းဆုံးယှဉ်သောစိတ်မှာ – ဒွေပဉ္စဝိညာဏ် ၁၀-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၂။ “ကာမနတ်နား အဟိတ်တရား” ဖြစ်ပါလျက် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုမှ ဖြစ်ရသော စိတ်ကို ဝေဒနာ၊ ဟိတ်၊ ကိစ္စ၊ ဒွါရ၊ အာရုံ၊ ဝတ္ထုတို့ဖြင့် ဝေဖန်ပြခဲ့ပါ။
“ကာမနတ်နား အဟိတ်တရား” ဖြစ်ပါလျက် ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုမှ ဖြစ်ရသောစိတ်မှာ- “ဟသိတုပ္ပါဒ်စိတ်”
ဝေဒနာ = သောမနဿဝေဒနာ၊
ကိစ္စ = ဇောကိစ္စ၊
ဒွါရ = ၆-ဒွါရ (ရံခါ)
အာရုံ = ကာလ ၃-ပါး၌ဖြစ်သော ကာမစိတ် (၅၄)၊ စေတသိက် (၅၂)၊ ရုပ် (၂၈)၊ ဟူသော
၃။ “စိတ်ဇောယာဉ်ပျံ လွန်လျင်မြန်” ဟုဆိုထားရာ “ဇော” အမည်ရသော စိတ်တို့ကို ရေတွက် ပြပြီးလျှင် ကြံစည်မှုမှန်သမျှ၌ သုံးသပ်၍ ရနိုင်/မရနိုင် အကြောင်းသွင်း၍ ရှင်းလင်းခဲ့ပါ။
“စိတ်ဇောယာဉ်ပျံ လွန်လျင်မြန်” ဟု ဆိုထားရာ “ဇော” အမည်ရသော စိတ်တို့မှာ –
အကုသိုလ်စိတ် = ၁၂-ပါး
မဟာကုသိုလ်/ ကြိယာစိတ် = ၁၆-ပါး
မဟဂ္ဂုတ်ကုသိုလ်/ ကြိယာစိတ် = ၁၈-ပါး
ဇောစိတ်ပေါင်း = ၅၅-ပါး / ၈၇-ပါး
ကြံစည်မှု (ဝိတက်) မှန်သမျှ၌ သုံးသပ်မှု (ဝိစာရ) ရနိုင်ပါသည်။
ကြံစည်မှု (ဝိတက်)သည် – ဒွေပဉ္စဝိညာဏ် ၁၀-ကြဉ်သော ကာမစိတ် (၄၄)၊ ပထမဈာန်စိတ် (၁၁)၌ ယှဉ်၍၊
သုံးသပ်မှု (ဝိစာရ)သည် – ဒွေပဉ္စဝိညာဏ် ၁၀-ကြဉ်သော ကာမစိတ် (၄၄)၊ ပထမဈာန်စိတ် (၁၁)၊ ဒုတိယဈာန်စိတ် (၁၁)၌
ယှဉ်သောကြောင့် ကြံစည်မှု (ဝိတက်) ဖြစ်သမျှစိတ်တိုင်းတွင် သုံးသပ်မှု (ဝိစာရ) သည်
၂၀၀၇-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ “ကိစ္စများမြောင် လူတို့ဘောင်” ဟူသည်နှင့်အညီ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ယောက် မွေးဖွားလာသည့်အချိန်မှ
သေသည့်အချိန်ထိ မလွဲမသွေ လုပ်ဆောင်ရမည့် ကိစ္စများကို ဆိုင်ရာ ဌာနနှင့် တွဲစပ်ပြပါ။
[ ၁၉၉၃-ခုနှစ်၊ နံပါတ်-၁ အဖြေနှင့်တူ။ ]
၂။ တဏှာယောက်ျား ဆောက်လုပ်ခဲ့သော ခန္ဓာအိမ်၏ တံခါးပေါက် (ဒွါရ)သို့
(က) ရံခါ ဝင်ထွက်ခွင့်ရသောစိတ်၊
(ခ) လုံးဝ ဝင်ထွက်ခွင့်မရသောစိတ်တို့ကို ဖော်ပြပါ။
တဏှာယောက်ျား ဆောက်လုပ်ခဲ့သော ခန္ဓာအိမ်၏ တံခါးပေါက် (ဒွါရ)သို့
(က) ရံခါ ဝင်ထွက်ခွင့်ရသောစိတ် – ဥပေက္ခာသန္တီရဏစိတ် = ၂-ပါး
(ခ) လုံးဝ ဝင်ထွက်ခွင့် မရသောစိတ် – မဟဂ္ဂုတ်ဝိပါက်စိတ် = ၉-ပါး
၃။ “ကြည့်သောသူ မြင်၏” ဟုဆိုရာဝယ် မြင်မှုကိစ္စကို အဘယ်စိတ်က ဆောင်ရွက်ပေးပါသနည်း၊ ဖြေဆို၍ ယင်းစိတ်၏ အာရုံကိုလည်း သိသာရုံ ဖော်ပြပါ။
မြင်မှု (ဒဿနကိစ္စ)ကို ဆောင်ရွက်သောစိတ်မှာ – စက္ခုဝိညာဏ်စိတ် ၂-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
(၁) အကုသလဝိပါက် စက္ခုဝိညာဏ်စိတ်၏ အာရုံ = ပစ္စပ္ပုန် (အနိဋ္ဌ) ရူပါရုံ
(၂) အဟိတ်ကုသလဝိပါက် စက္ခုဝိညာဏ်စိတ်၏ အာရုံ = ပစ္စပ္ပုန် (ဣဋ္ဌ) ရူပါရုံ
၄။ “ဒုက္ခမျိုးစေ့ဖြစ်သော သုခကို ငါ ရှောင်ရှားမည်” ၌ ပါဝင်သော “ဒုက္ခ၊ သုခ”တို့ကို အကျိုးဝိပါက်စိတ်နှင့် တွဲစပ်ပြပါ။
ဝေဒနာ	– အကျိုးဝိပါက်စိတ်
(၁) ဒုက္ခ(ကိုယ်ဆင်းရဲ)	= အကုသလဝိပါက် ဒုက္ခသဟဂုတ် ကာယဝိညာဏ်စိတ်
(၂) သုခ(ကိုယ်ချမ်းသာ)	= အဟိတ်ကုသလဝိပါက် သုခသဟဂုတ် ကာယဝိညာဏ်စိတ်
၅။ “လောကတွင် မနောဓာတ်ဖြင့် အတတ်ဟောသည်” ဟု ဆိုရာ၌ မနောဓာတ်အမည်ရသော စိတ်တို့ကို ရေတွက်ပြပြီး၊ ယင်း မနောဓာတ်များသည် အဘယ်ကို အာရုံပြုပါသနည်း၊ ဖြေဆိုခဲ့ပါ။
မနောဓာတ်အမည်ရသောစိတ် = ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ် = ၁-ပါး
ပေါင်း – မနောဓာတ် = ၃-ပါး
ယင်း မနောဓာတ်များ၏ အာရုံမှာ –
ပစ္စုပ္ပန် ပဉ္စာရုံဟုဆိုအပ်သော ကာမအာရုံ ၅-ပါးကို ဧကန် အာရုံပြုပါသည်။
၂၀၀၈-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ ဝေဒနာတို့ကို ခံစားမှု အနုဘဝနနည်း၊ အစိုးရမှု ဣနြ္ဒိယဘေဒနည်းအားဖြင့် ခွဲခြားပြ၍ (က) ဟိတ်မရှိသောစိတ် (ခ) ဟိတ်တစ်ပါးတည်းသာ ရှိသောစိတ် (ဂ) ဟိတ်နှစ်ပါး ရှိသောစိတ် (ဃ) ဟိတ်သုံးပါး ရှိသောစိတ်တို့ကိုလည်း သင်္ချာမျှ ဖော်ပြပါ။
ဝေဒနာတို့ကို ခံစားမှု အနုဘဝနနည်းအားဖြင့် ခွဲခြားရသော် –
(၃)	အဒုက္ခ – မသုခဝေဒနာ ဟူ၍ ဝေဒနာ ၃- ပါး ပြားပါသည်။
ဝေဒနာတို့ကို အစိုးရမှု ဣနြ္ဒိယဘေဒနည်းအားဖြင့် ခွဲခြားရသော် –
(၅)	ဥပေက္ခာဝေဒနာဟူ၍ ဝေဒနာ ၅-ပါး ပြားပါသည်။
(က) ဟိတ်မရှိသော စိတ် = ၁၈-ပါး
(ခ)	ဟိတ်တစ်ပါးသာ ရှိသောစိတ် = ၂-ပါး
(ဂ)	ဟိတ်နှစ်ပါး ရှိသောစိတ် = ၂၂-ပါး
(ဃ)	ဟိတ်သုံးပါး ရှိသောစိတ် (အကျဉ်း) = ၄၇-ပါး၊ (အကျယ်) ၇၉-ပါး
၂။ “အလုပ်လုပ်မှ လူကြီး၊ အလုပ်မလုပ်လျှင် လူအို” ဟု ဆိုကြရာ အလုပ်အများဆုံးလုပ်သော စုံတွဲကို ဖော်ပြ၍၊
ထိုစိတ်ကို ဒွါရ၊ အာရုံ၊ ဝတ္ထုတို့ဖြင့် ခွဲဝေပြပါ။
အလုပ် အများဆုံး လုပ်သော စုံတွဲမှာ – ဥပေက္ခာသန္တီရဏစိတ် ၂-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
ဒွါရ = ၆-ဒွါရ (ရံခါ)ဖြစ် ၊ (ရံခါ)လွတ်၏။
အာရုံ = ကာမစိတ်-၅၄၊ စေတသိက်-၅၂၊ ရုပ်-၂၈ ဟုဆိုအပ်သော ကာမအာရုံ ၆-ပါးကို ဧကန် အာရုံပြု၏။
ဝတ္ထု = ဟဒယဝတ္ထု (ဧကန်)
၃။ “တံခါးမရှိ ဓားမရှိ” ဟု ဆိုကြရာ တံခါးမရှိသော (ဒွါရမှလွတ်သော) စိတ်တို့ကို ဖော်ပြ၍၊ နိဗ္ဗာန်ကိုသာ အာရုံပြုသော စိတ်ကိုလည်း ရေးပြပါ။
“တံခါးမရှိ ဓားမရှိ” ဟု ဆိုကြရာ တံခါးမရှိသော (ဒွါရမှလွတ်သော) စိတ်တို့မှာ –
၆-ဒွါရမှ ရံခါလွတ်သောစိတ် = ဥပေက္ခာသန္တီရဏစိတ် = ၂-ပါး
မဟာဝိပါက်စိတ် = ၈-ပါး
၆-ဒွါရမှ အမြဲလွတ်သောစိတ် = မဟဂ္ဂုတ်ဝိပါက်စိတ် = ၉-ပါး
နိဗ္ဗာန်ကိုသာ အာရုံပြုသောစိတ် = လောကုတ္တရာစိတ်(ကျဉ်း)= ၈-ပါး၊ (ကျယ်)၄၀-ပါး
၄။ မနောဓာတ် အမည်ရသော စိတ်တို့ကို ရေးသားပြ၍၊ နှလုံးသား မရှိသော ဟဒယဝတ္ထုကို မမှီသော စိတ်ကိုလည်း ရေးပြပါ။
မနောဓာတ်အမည်ရသော စိတ် –
ပဉ္စဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ် (၁)ပါး + သမ္ပဋိစ္ဆိုင်းစိတ် (၂)ပါး = ၃-ပါး
နှလုံးသားမရှိသော ဟဒယဝတ္ထုကို မမှီသောစိတ် –
= ဒွေပဉ္စဝိညာဏ် (၁၀)ပါး + အရူပ (၄)ပါး = ၁၄-ပါး
၂၀၀၉-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ “ဘဝပြောင်းကောင်းဖို့ ဟိတ်အကြောင်းကောင်းဖို့ လိုတယ်” ဟု ဆိုကြရာ လိုအပ်သော အကြောင်းဟိတ်တို့ကို ဖော်ပြ၍၊ ဧကဟိတ်စိတ်တို့ကိုလည်း ရေးသားပြပါ။
လိုအပ်သော အကြောင်းဟိတ် = အလောဘဟိတ်၊ အဒေါသဟိတ်၊ အမောဟဟိတ်
ပေါင်း – ကုသိုလ်ဟိတ် ၃-ပါး
ဧကဟိတ်စိတ်မှာ = မောဟမူစိတ် ၂-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ခန္ဓာအိမ်၌ ရနိုင်သော တံခါးပေါက် ဒွါရတို့တွင် မနောဒွါရမည်သော စိတ်ကို ဖော်ပြ၍၊ မနောဒွါရ၌ဖြစ်သော
မနောဒွါရ မည်သောစိတ် = ဘဝင်စိတ်တို့၏ အဆုံးဖြစ်သော ဘဝဂုင်္ပစ္ဆေဒစိတ် ၁၉-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
မနောဒွါရ၌ ဖြစ်သောစိတ်တို့မှာ – မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ်= ၁-ပါး
အပ္ပနာဇောစိတ် = ၂၆-ပါး
တဒါရုံစိတ် = ၁၁-ပါး
စိတ်ပေါင်း = ၆၇-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၃။ “အာရုံတွေ ထွေပြား များလှသည်”ဟု ဆိုကြရာ အထွေပြားဆုံး အများဆုံး အာရုံ၏ အပြားကို ရေတွက်ပြပါ။
အထွေပြားဆုံး အများဆုံးအာရုံ = ဓမ္မာရုံ
ဓမ္မာရုံအပြား =	အကျဉ်း ၊ အကျယ်
(၁) စိတ် ၊ ၈၉-ပါး
(၂) စေတသိက် ၊ ၅၂-ပါး
(၃) ပသာဒရုပ် ၊ ၅-ပါး
(၄) သုခုမရုပ် ၊ ၁၆-ပါး
(၅) နိဗ္ဗာန် ၊ ၁-ပါး
(၆) ပညတ် ၊ ၁-ပါး
ပေါင်း	၆-ပါး ၊ ၁၆၄-ပါး
၄။ “ဤကောင်းမှုသည် နိဗ္ဗာန်၏ အထောက်အပံ့ ဖြစ်ပါစေ” ဟု ပေးလှူကြရာ၌ ၎င်းနိဗ္ဗာန်ကို ဧကန်၊ အနေကန်
အာရုံပြုနိုင်သော တရားတို့ကို ဖော်ပြခဲ့ပါ။
နိဗ္ဗာန်ကို ဧကန် အာရုံပြုနိုင်သော တရားမှာ = လောကုတ္တရာစိတ် ၈-ပါး
နိဗ္ဗာန်ကို အနေကန် အာရုံပြုနိုင်သောတရား –
အဘိညာဉ် = ၂-ပါး
ပေါင်း = ၁၁-ပါး
၅။ လောက၌ အမှီရှိမှ ကြီးပွားသည်ဟု ဆိုကြသော်လည်း နှလုံးသားကို မမှီဘဲ ဖြစ်သောစိတ်ကို ထုတ်ပြ၍၊
စိတ်ဓာတ်ကျသည်ဟု ဆိုကြရာတွင် စိတ်ဓာတ်များစွာမှ ဝိညာဏဓာတ်မဖက် သက်သက်သော စိတ်ဓာတ်ကိုလည်း အသေးစိတ် ရေတွက်ပြပါ။
နှလုံးသား (ဟဒယဝတ္ထုရုပ်)ကို အမြဲမမှီဘဲ ဖြစ်သောစိတ် –
ပေါင်း = ၁၄-ပါး
နှလုံးသား (ဟဒယဝတ္ထုရုပ်)ကို ရံခါ မမှီသောစိတ်မှာ –
အရူပ ကုသိုလ်စိတ် = ၄-ပါး
အရူပ ကြိယာစိတ် = ၄-ပါး
အထက်လောကုတ္တရာစိတ် = ၇-ပါး
ပေါင်း = ၄၂-ပါး
ဝိညာဏဓာတ်မဖက် သက်သက်သော စိတ်ဓာတ်ကို အသေးစိတ် ရေတွက်ပြရသော် –
အဟိတ်ကုသလဝိပါက် ဥပေက္ခာသဟဂုတ် သမ္ပဋိစ္ဆိုင်း = ၁-ပါး
၂၀၁၀-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၁။ ကိစ္စများမြောင် လူတို့ဘောင်ဟူသော စကားအရ ကိစ္စအများဆုံးရှိသော စိတ်နှင့် ထိုစိတ်၏ ကိစ္စတို့ကို ဌာနနှင့်တကွ တွဲစပ်ပြပါ။ ကိစ္စအများဆုံးစိတ်မှာ – ဥပေက္ခာသန္တီရဏစိတ် ၂-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
ထိုစိတ်၏ ကိစ္စတို့ကို ဌာနနှင့်တကွ တွဲစပ်ဖော်ပြရသော် –
၂။ “မမြင်ရရာ ကိလေသာ၊ သူ့ဟာသူ ငြိမ်းသည်”ဟု ဆိုသည့် စကား မှန်/မမှန် ရှင်းပြ၍၊ ၎င်းမြင်သိစိတ်နှင့်အတူ ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်တို့ကိုလည်း ဒွါရသင်္ဂဟအရ ဖော်ပြပါ။
မမြင်ရရာ ကိလေသာ သူ့ဟာသူ ငြိမ်းသည် – ဟူသောစကား မှန်ပါသည်။ အကြောင်းမှာ –
လောဘ ဖြစ်စရာ အာရုံကို မြင်ပါက – လောဘ ဖြစ်မည်။
ဒေါသ ဖြစ်စရာ အာရုံကို မြင်ပါက – ဒေါသ ဖြစ်မည်။
မောဟ ဖြစ်စရာ အာရုံကို မြင်ပါက – မောဟ ဖြစ်မည်။
ဤသို့ စသည်ဖြင့် ကိလေသာ(အကုသိုလ်များ) ဖြစ်ပါမည်၊ ထိုအာရုံများကို မမြင်ခဲ့ပါမူ ကိလေသာများ မဖြစ် (ငြိမ်း) ပါသည်။
မြင်သိစိတ် (စက္ခုဝိညာဏ်)နှင့်အတူ ဖြစ်ပေါ်လာသော စိတ်တို့ကို ဒွါရသင်္ဂဟအရ ဖော်ပြရသော် –
ဝုဋ္ဌော (မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းစိတ်) = ၁-ပါး
တဒါရုံ (မဟာဝိပါက်စိတ်) = ၈-ပါး
ပေါင်း မြင်သိစိတ်နှင့်အတူဖြစ်သောစိတ် = ၄၄-ပါး
၃။ အာရုံတွေက များလိုက်တာ ဟူရာဝယ် အကျယ်ပြန့်ဆုံး အာရုံ၏အပြားတို့ကို ဖော်ထုတ်၍၊ ပညတ်နှင့် ပရမတ် ကွဲဖို့လိုသည်ဟူသော စကားအရ နောက်ဆုံးပရမတ်တရားကို အာရုံပြုသည့်တရားနှင့် ယှဉ်တွဲဖော်ပြပါ။
အကျယ်ပြန့်ဆုံး အာရုံမှာ – ဓမ္မာရုံ ဖြစ်ပါသည်။
ဓမ္မာရုံ အပြားတို့ကို ဖော်ထုတ်ပြရသော် –
(၁)	စိတ် = ၈၉-ပါး
(၂)	စေတသိက် = ၅၂-ပါး
(၃)	ပသာဒရုပ် = ၅-ပါး
(၄)	သုခုမရုပ် = ၁၆-ပါး
(၅)	နိဗ္ဗာန် = ၁-ပါး
(၆)	ပညတ် = ၁-ပါး
ပေါင်း ဓမ္မာရုံ (ကျဉ်း) ၆-ပါး = (ကျယ်) ၁၆၄-ပါး
နောက်ဆုံးပရမတ်တရားကို အာရုံပြုသည့်တရားနှင့် ယှဉ်တွဲဖော်ပြရသော် –
နိဗ္ဗာန်	၁။ လောကုတ္တရာ ၈-ပါးဖြင့် ဧကန်အာရုံပြုပါသည်။
၂။ မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်း ၁-ပါး၊ မဟာကုသိုလ်-ကြိယာ ဉာဏသမ္ပယုတ်စိတ် ၈-ပါး၊ အဘိညာဉ်ဒွေ
ပေါင်း ၁၁-ပါးဖြင့် အနေကန် အာရုံပြုပါသည်။
၄။ အပါယ်ဘုံနှင့် ရူပဘုံတို့၌ ရနိုင်သော ဝတ္ထုအမျိုးအစားတို့ကို ညွှန်ပြ၍ နှလုံးသား (ခေါ်) ဟဒယဝတ္ထု ရံဖန်ရံခါမှီသော တရားတို့ကိုလည်း ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြပါ။
အပါယ်ဘုံ၌ ရနိုင်သော ဝတ္ထုအမျိုးအစားများမှာ –
(၆)	ဟဒယဝတ္ထု ဟူ၍ ဝတ္ထုရုပ် ၆-ပါးလုံး ရရှိပါသည်။
ရူပဘုံ၌ ရနိုင်သော ဝတ္ထုအမျိုးအစားတို့မှာ –
(၃)	ဟဒယဝတ္ထု ဟူ၍ ဝတ္ထုရုပ် ၃-ပါးသာ ရရှိပါသည်။
(နှလုံးသားခေါ်) ဟဒယဝတ္ထု၌ ရံဖန်ရံခါမှီသော တရားတို့ကို ပြည့်စုံစွာ ဖော်ပြရသော် –
သောတာပတ္တိမဂ်ကြဉ် လောကုတ္တရာစိတ် = ၇-ပါး
ပေါင်း ဟဒယဝတ္ထု၌ ရံခါမှီသော စိတ် = ၄၂-ပါး
၂၀၁၁-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
ဟိတ် ၆-ပါးကို ဇာတ်အားဖြင့် ခွဲခြားပြရသော် –
(၁) အကုသိုလ်ဇာတ် = လောဘဟိတ်၊ ဒေါသဟိတ်၊ မောဟဟိတ်။
(၂) ကုသိုလ်ဇာတ် = အလောဘဟိတ်၊ အဒေါသဟိတ်၊ အမောဟဟိတ်။
(၃) ဝိပါက်ဇာတ် = အလောဘဟိတ်၊ အဒေါသဟိတ်၊ အမောဟဟိတ်။
(၄) ကြိယာဇာတ် = အလောဘဟိတ်၊ အဒေါသဟိတ်၊ အမောဟဟိတ်။
၇။ တစ်ကိစ္စ-တစ်ဒွါရ၌ ဖြစ်နိုင်သောစိတ်တို့ကို ၎င်းတို့၏ ဖြစ်ရာကိစ္စ၊ ဖြစ်ရာဒွါရ အားလျော်စွာ ထိုက်သင့်သလို
တစ်ကိစ္စ-တစ်ဒွါရ၌ ဖြစ်နိုင်သောစိတ်တို့ကို ၎င်းတို့၏ ဖြစ်ရာကိစ္စ၊ ဖြစ်ရာဒွါရ အားလျော်စွာ တွဲစပ်ဖြေဆိုပေးရသော် –
တစ်ကိစ္စ-တစ်ဒွါရ၌ ဖြစ်နိုင်သောစိတ် = ဖြစ်ရာကိစ္စ ၊ ဖြစ်ရာဒွါရ
စက္ခုဝိညာဏ်စိတ် ၂-ပါး = ဒဿနကိစ္စ ၊ စက္ခုဒွါရ
သောတဝိညာဏ်စိတ် ၂-ပါး = သဝနကိစ္စ္စ ၊ သောတဒွါရ
ဃာနဝိညာဏ်စိတ် ၂-ပါး = ဃာယနကိစ္စ္စ ၊ ဇိဝှါဒွါရ
ဇိဝှါဝိညာဏ်စိတ် ၂-ပါး = သာယနကိစ္စ္စ ၊ ဃာနဒွါရ
ကာယဝိညာဏ်စိတ် ၂-ပါး = ဖုသနကိစ္စ ၊ ကာယဒွါရ
အပ္ပနာဇောစိတ် ၂၆-ပါး = ဇောကိစ္စ္စ ၊ နောဒွါရ
၈။ လူ့ခန္ဓာအိမ်ရှိ တံခါးခြောက်ပေါက်က ရုပ်နှင့်နာမ် မလွဲရအောင် ခွဲခြားဝေဖန်မှုပြုပြ၍၊ လူ့ခန္ဓာအိမ် တံခါးခြောက်ပေါက်မှ လွတ်မြောက်သွားသော ဥပေက္ခာသဟဂုတ် သန္တီရဏ စိတ်၂-ပါး၏ လုပ်ဆောင်နိုင်သောကိစ္စ၊ လိုက်စားနိုင်သောအာရုံ၊ မှီရာဝတ္ထုတို့ကို ဖြေဆိုပါ။
လူ့ခန္ဓာအိမ်ရှိ တံခါးခြောက်ပေါက်ကို ရုပ်နှင့်နာမ် မလွဲရအောင် ခွဲခြားဝေဖန်မှုပြုရသော် –
ဒွါရအပြား = တရားကိုယ် = ရုပ်/နာမ် ဒွါရ
(၁) စက္ခုဒွါရ = စက္ခုပသာဒရုပ် = ရုပ်ဒွါရ
(၂) သောတဒွါရ = သောတပသာဒရုပ် = ရုပ်ဒွါရ
(၃) ဃာနဒွါရ = ဃာနပသာဒရုပ် = ရုပ်ဒွါရ
(၄) ဇိဝှါဒွါရ = ဇိဝှါပသာဒရုပ် = ရုပ်ဒွါရ
(၅) ကာယဒွါရ = ကာယပသာဒရုပ် = ရုပ်ဒွါရ
(၆) မနောဒွါရ = ဘဝဂုင်္ပစ္ဆေဒစိတ် ၁၉-ပါး = နာမ်ဒွါရ
လူ့ခန္ဓာအိမ်ရှိ တံခါးခြောက်ပေါက်မှ လွတ်မြောက်သွားသော ဥပေက္ခာသဟဂုတ် သန္တီရဏစိတ် ၂-ပါး၏ –
(၁) လုပ်ဆောင်နိုင်သောကိစ္စ = ပဋိသန္ဓေကိစ္စ၊ ဘဝင်ကိစ္စ၊ စုတိကိစ္စ။
(၂) လိုက်စားနိုင်သောအာရုံ = ကံ၊ ကမ္မနိမိတ်၊ ဂတိနိမိတ် ၃-ပါးတို့မှ တစ်ပါးပါး။
(၃) မှီရာဝတ္ထု = ဟဒယဝတ္ထု (အမြဲ)
၉။ ဈာန်၊ အဘိညာဉ်ဟူသောစကား၌ အဘယ်တရားတို့ကို အဘိညာဉ်ဟု ခေါ်ဆိုသည်ကို တိကျစွာ ဖော်ပြ၍၊
အသညသတ်ကြဉ်သော ရူပ ၁၅-ဘုံ၌မှီသော သုံးပါးသောဝတ္ထုတို့ကို ၄-ပါးသော ဝိညာဏဓာတ်တို့နှင့် တွဲစပ်ပြပါ။
အဘိညာဉ်ဟု ခေါ်ဆိုနိုင်သောတရားမှာ –
အလွန်အကျူး အထူးသိတတ်သော သိစွမ်းနိုင်သော ရူပါဝစရကုသိုလ် ပဉ္စမဈာန်၊ ရူပါဝစရကြိယာ ပဉ္စမဈာန်စိတ်နှင့်
ယှဉ်သောဉာဏ် (ပညာစေတသိက်)ကို အဘိညာဉ် ဟု ခေါ်၏။ ထိုဉာဏ်နှင့်ယှဉ်သော ရူပါဝစရကုသိုလ်၊ ကြိယာ
ပဉ္စမဈာန်စိတ်ကိုလည်း တကွ ဖြစ်ဖက်နည်းအားဖြင့် အဘိညာဉ်ဟုပင် ခေါ်ဆိုရပါသည်။
အသညသတ်ကြဉ်သော ရူပ (၁၅)ဘုံ၌ မှီသော သုံးပါးသောဝတ္ထုရုပ်တို့ကို လေးပါးသော ဝိညာဏဓာတ်တို့နှင့်
ဝတ္ထုရုပ် ၃-ပါး	ဝိညာဏဓာတ် ၄-ပါး
(၁) စက္ခုဝတ္ထု	=	စက္ခုဝိညာဏဓာတ်
(၂) သောတဝတ္ထု	=	သောတဝိညာဏဓာတ်
(၃) ဟဒယဝတ္ထု	=	မနောဓာတ်၊ မနောဝိညာဏဓာတ် ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ စိတ်တိုင်းသည် နှလုံးသားဟု ဆိုအပ်သော ဟဒယဝတ္ထုကိုမှီ၍ ဖြစ်နိုင်/မဖြစ်နိုင် အဘိဓမ္မာသရူပတ္ထအားဖြင့်
စိတ်တိုင်းသည် နှလုံးသားဟုဆိုအပ်သော ဟဒယဝတ္ထုကို မှီ၍ ဖြစ်နိုင်-မဖြစ်နိုင် ခွဲခြား ဝေဖန်ပြရသော် –
နှလုံးသားဟု ဆိုအပ်သော ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲမှီသောစိတ် ၃၃-ပါးမှာ –
ပေါင်း စိတ် = ၃၃-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
ဟဒယဝတ္ထုကို ရံခါမှီ – ရံခါမမှီသော စိတ်ပေါင်း ၄၂-ပါးမှာ –
လောဘမူစိတ် = ၂-ပါး
ပေါင်း စိတ် = ၄၂-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
ဟဒယဝတ္ထကို လုံးဝမမှီသောစိတ်မှာ = အရူပါဝစရဝိပါက်စိတ် ၄-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
(ထို့ပြင် ဒွေပဉ္စဝိညာဏ် ၁၀-ပါးသည်လည်း ဟဒယဝတ္ထုကို မမှီဘဲ ပဉ္စဝတ္ထု၌သာ အသီးသီး အမြဲမှီကြပါသည်။)
သို့ဖြစ်ပါ၍ စိတ်တိုင်းသည် နှလုံးသားဟုဆိုအပ်သော ဟဒယဝတ္ထုကို အမြဲမှီ၍ ဖြစ်နိုင်သော စိတ်များရှိသလို၊ ရံခါမှီ၍ ဖြစ်သောစိတ်၊ လုံးဝ မမှီသောစိတ်များလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။
၂၀၁၂-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၇။ ကိစ္စ(၁၄)ပါးနှင့် ဌာန(၁၀)ပါးကို တွဲစပ်ပြ၍ လူ့ဘဝ၏ အစဖြစ်သော ပဋိသန္ဓေနေမှုကိစ္စနှင့် အဆုံးဖြစ်သော
စုတိကိစ္စတို့ တပ်ရာစိတ်ချင်း တူ-မတူ အဘိဓမ္မာသရုပ်သဘော နှီးနှောဝေဖန် ပြပါ။
ကိစ္စ(၁၄)ပါးနှင့် ဌာန(၁၀)ပါးကို တွဲစပ်ပြရသော် –
[ ၁၉၉၃-ခုနှစ် – မေးခွန်းနံပါတ် ၁-အဖြေကို ကြည့်ပါ။ ] လူ့ဘဝ၏အစဖြစ်သော ပဋိသန္ဓေနေမှုကိစ္စနှင့် အဆုံးဖြစ်သော စုတိကိစ္စတို့တပ်ရာ စိတ်ချင်း တူ-မတူ ဝေဖန်ရသော် –
လူ့ဘဝအစ ပဋိသန္ဓေစိတ်နှင့် အဆုံးဖြစ်သော စုတိစိတ်တို့ တပ်ရာစိတ်ချင်း တူညီမှု ရှိပါသည်။
ပေါင်း = ၁၉-ပါး သော
စိတ်တို့သည် ဘဝအစ ပဋိသန္ဓေကိစ္စ ဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ကံအရှိန် ကုန်သော အခါ စုတိကိစ္စကို နောက်ဆုံး
ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ကြသောကြောင့် တပ်ရာစိတ်ချင်း တူညီကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၈။ မနောဒွါရ၌ဖြစ်သောစိတ်တို့ကို ဖော်ပြ၍ ၎င်းမနောဒွါရိကစိတ်တို့၏ အာရုံနှင့် ကာလတို့ကိုလည်း ပြည့်စုံစွာ
မနောဒွါရ၌ဖြစ်သော စိတ်တို့မှာ –
ပေါင်း = ၆၇-ပါး တို့ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုမနောဒွါရိကစိတ်တို့၏ အာရုံနှင့်ကာလတို့မှာ –
မနောဒွါရိကစိတ် ၆၇-ပါးသည် ပစ္စုပ္ပန်၊ အတိတ်၊ အနာဂတ်ဟူသော ကာလ ၃-ပါးနှင့် ကာလဝိမုတ်ဖြစ်သော အာရုံ ၆-ပါး (ကာမ၊ မဟဂ္ဂုတ်၊ နိဗ္ဗာန်၊ ပညတ်အစုံ) တို့ကို ထိုက်သည့်အားလျော်စွာ အာရုံပြုပါသည်။
၉။ အရူပစိတ်ချင်း တူပါလျက် ပြုရာအာရုံချင်း မတူပုံကို ခွဲခြားပြ၍၊ ရူပဘုံသား ဗြဟ္မာများ၌ ရနိုင်သော ဝတ္ထုရုပ်နှင့် မရနိုင်သော ဝတ္ထုရုပ်တို့ကိုလည်း ဖော်ပြပါ။
အရူပစိတ်ချင်း တူပါလျက် ပြုရာအာရုံချင်း မတူပုံကို ခွဲခြားပြရသော် –
အာကာသာနဉ္စာယတနစိတ်	၃-ပါး = ကောင်းကင်ပညတ် (ဓမ္မာရုံ)
ဝိညာဏဉ္စာယတနစိတ်	၃-ပါး = အာကာသာနဉ္စာယတန ကုသိုလ်၊ ကြိယာ စိတ် (မဟဂ္ဂုတ် ဓမ္မာရုံ)
အာကိဉ္စညာယတနစိတ်	၃-ပါး = နတ္ထိဘောပညတ် (ဓမ္မာရုံ)
နေဝသညာနာသညာယတနစိတ်	၃-ပါး = အာကိဉ္စညာယတန ကုသိုလ်၊ ကြိယာစိတ် (မဟဂ္ဂုတ် ဓမ္မာရုံ)
ရူပဘုံသားဗြဟ္မာများ ရနိုင်သော ဝတ္ထုရုပ်တို့မှာ –
စက္ခုဝတ္ထု၊ သောတဝတ္ထုနှင့် ဟဒယဝတ္ထုရုပ် ပေါင်း ဝတ္ထုရုပ် ၃-ပါး ရနိုင်ပါသည်။
ရူပဘုံသားဗြဟ္မာများ မရနိုင်သော ဝတ္ထုရုပ်တို့မှာ –
ဃာနဝတ္ထု၊ ဇိဝှါဝတ္ထုနှင့် ကာယဝတ္ထုရုပ် ပေါင်း ဝတ္ထုရုပ် ၃-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းဟူသော ဝုဋ္ဌောစိတ်ကို ခံစားမှု ဝေဒနာ၊ ဖြစ်ရာဒွါရ၊ လိုက်စားရအာရုံ၊ မှီရာဝတ္ထုတို့ဖြင့် ဝေဖန်ပြပါ။
မနောဒွါရာဝဇ္ဇန်းဟူသော ဝုဋ္ဌောစိတ်ကို ခံစားမှုဝေဒနာ၊ ဖြစ်ရာဒွါရ၊ လိုက်စားရာ အာရုံ၊ မှီရာဝတ္ထုတို့ဖြင့်
ခံစားမှု ဝေဒနာ = ဥပေက္ခာဝေဒနာ
ဖြစ်ရာဒွါရ = ၆-ဒွါရ (မြဲ)
လိုက်စားရာအာရုံ = အလုံးစုံသော (စိတ် ၈၉-ပါး၊ စေတသိက် ၅၂-ပါး၊ ရုပ် ၂၈-ပါး၊ နိဗ္ဗာန်၊ ပညတ်) အာရုံ ၆-ပါး
မှီရာဝတ္ထု = ဟဒယဝတ္ထုရုပ်ကို ရံခါမှီ-ရံခါမမှီပါ။
၂၀၁၃-ခုနှစ် ပကိဏ်းပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
၇။ ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ သီးခြားစီ ပိုင်ဆိုင်ကြသည့် (၅၃)ပါး နာမ်တရားတို့ကို ရေတွက်ပြ၍၊ နည်းအလိုက် နာမည်သာကွဲ တစ်မျိုးတည်းဖြစ်သော ဝေဒနာကိုလည်း ဖြေဆိုပြပါ။
ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ သီးခြားစီ ပိုင်ဆိုင်ကြသည့် (၅၃)ပါး နာမ်တရားတို့မှာ –
အာရုံကို သိခြင်းသဘောလက္ခဏာအားဖြင့် စိတ် = ၁-ပါး
မိမိသဘောလက္ခဏာအားဖြင့် စေတသိက် = ၅၂-ပါး
ပေါင်းနာမ်တရား = ၅၃-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
နည်းအလိုက် နာမည်သာကွဲ တစ်မျိုးတည်းဖြစ်သော ဝေဒနာမှာ –
အနုဘဝနလက္ခဏဘေဒနည်းအရ – ဝေဒနာ (၃)ပါး၌ –
ဣနြ္ဒိယဘေဒနည်းအရ – ဝေဒနာ(၅)ပါး၌ ဥပေက္ခာဝေဒနာဟု ဆိုထားသောကြောင့် နည်းအလိုက် နာမည်သာကွဲ
တစ်မျိုးတည်း ဖြစ်သော ဝေဒနာမှာ – ဥပေက္ခာဝေဒနာ ဖြစ်ပါသည်။
၈။ ဒွိဟိတ်စိတ် (၂၂)ပါးကို ဆိုင်ရာဟိတ်များနှင့်တွဲစပ်ပြ၍၊ ဇောမထိုက်သောကြိယာ၊ ဇောထိုက်သော
ဒွိဟိတ်စိတ် (၂၂)ပါးကို ဆိုင်ရာဟိတ်များနှင့် တွဲစပ်ပြရသော် –
လောဘမူစိတ် (၈)ပါး = လောဘဟိတ်၊ မောဟဟိတ်၊
ဒေါသမူစိတ် (၂)ပါး = ဒေါသဟိတ်၊ မောဟဟိတ်၊
ဉာဏဝိပ္ပယုတ်စိတ် (၁၂)ပါး = အလောဘဟိတ်၊ အဒေါသဟိတ်၊
ဇောမထိုက်သော ကြိယာစိတ်မှာ –
ပေါင်း = ၂-ပါး
ဇောထိုက်သော ဝိပါက်စိတ်မှာ –
လောကုတ္တရာ ဝိပါက်စိတ်အကျဉ်း = ၄-ပါး
(တစ်နည်း) ဖိုလ်စိတ်အကျဉ်း = ၄-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
၉။ ကိစ္စ (၅)ခုကို တစ်ဌာနပေါင်းယူထားသော ဌာနအမည်ကို ဖြေဆိုပြ၍၊ ဥပေက္ခာသဟဂုတ် သန္တီရဏစိတ် ၂-ပါး၏ (၆)ဒွါရမှ လွတ်မြောက်နိုင်သော အရေးကိစ္စ၊ မလွတ်မြောက်နိုင်သော အရေးကိစ္စတို့ကိုလည်း ဖြေဆိုပြပါ။
ကိစ္စ (၅)ခုကို တစ်ဌာနတည်း ပေါင်းယူထားသော ဌာနအမည်မှာ – ပဉ္စဝိညာဏ်ဌာန ဖြစ်ပါသည်။
ဥပေက္ခာသဟဂုတ် သန္တီရဏစိတ် ၂-ပါး၏ (၆)ဒွါရမှ လွတ်မြောက်နိုင်သောအရေး ကိစ္စမှာ –
မလွတ်မြောက်နိုင်သော အရေးကိစ္စမှာ – တဒါရုံကိစ္စ
၁၀။ ကာမဘုံသား လူအများ ပိုင်ဆိုင်ရသည့် ရုပ်ဝတ္ထုများကို ရေတွက်ပြ၍ (၅)ဒွါရ (၅)အာရုံ အမြဲမှီငြား
ဝတ္ထုတစ်ပါးသာရှိသော စိတ်ကိုလည်း ဖြေဆိုပြပါ။
ကာမဘုံသား လူအများ ပိုင်ဆိုင်ရသည့် ရုပ်ဝတ္ထုများမှာ –
စက္ခုဝတ္ထု၊ သောတဝတ္ထု၊ ဃာနဝတ္ထု၊ ဇိဝှါဝတ္ထု၊ ကာယဝတ္ထု၊ ဟဒယဝတ္ထု ဟူသော ဝတ္ထုရုပ် (၆)ပါး ဖြစ်ပါသည်။
(၅)ဒွါရ (၅)အာရုံ အမြဲမှီငြား ဝတ္ထု (၁)ပါးသာရှိသော စိတ်မှာ –
ပေါင်း – မနောဓာတ် = ၃-ပါး ဖြစ်ပါသည်။
⟵ပထမဆင့် စေတသိက်ပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ
ဒုတိယဆင့် ၀ီထိပိုင်း မေးခွန်းဟောင်းများ⟶